ကျေးလက်နိုင်ငံတော်: August 2010
Posted by victorOway at 12:00 PM No comments:
-၂၈ သြဂုတ် ၂၀၁၀
အခြေခံဒေသထိုးဖောက်ရေးကာလအတောအတွင်းအချို့ရဲဘော်များမှာဒေသခံတိုင်းရင်းသူများနှင့်အိမ်ထောင် ရက်သားကျကြသည်။အိမ်ထောင်သည်များကိုစစ်ကြောင်းဖြင့်မလိုက်စေလိုပဲမြောက်ဘက်နယ်စပ်မျဉ်း(အထူး ဒေသနှင့်ကယန်းဒေသအစပ်)ကိုးဒစ်ရွာနှင့်ချဉ်ပတောင်ရွာကြားရှိလယ်ကျင်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိမြောင်းများ၌ ပုန်းတဲများထား၍ နေစေသည်။
ထိုအချိန်ကယန်းပြည်သစ်တပ်ဖွဲ့မှာသစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်း၎င်းတို့ခေါင်းဆောင်အတွင်းရေးမှူးဗိုလ်အိုက် ဒေါင်းမှာမိုင်းထိ၍ခြေထောက်ဖြတ်ပစ်လိုက်ရသည့်အပေါ်ကေအန်ယူအားအခဲမပြေဖြစ်ချိန်၊နားလည်မှုလွဲမှားနေ ချိန်၌ကယန်းပြည်သစ်လှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့မှကျနော်တို့ကျနော်တို့မကဒတအလုပ်အဖွဲ့အား၎င်းတို့နှင့်လာရောက် ပူးပေါင်းရန်စာဖြင့်ကမ်းလှမ်းလာသည်။ကျနော်တို့မှာဗဟိုမှညွှန်ကြားချက်မရသေးပဲ၎င်းတို့ကမ်းလှမ်းလာသည့် အပေါ်အချိန်ကာလတစ်ခုအထိစောင့်ရန်ပြန်ကြားထားသည်။
မကြာမီကယန်းဒေသခံတပ်ဖွဲ့မှအိမ်ထောင်သည်များစခန်းချသည့်နေရာသို့လာရောက် နေရာယူပြီးသေနတ်များ ဖြင့်လာရောက်ပစ်ခတ်ကြ၍အိမ်ထောင်သည်ရဲဘော်များမှမဟာမိတ်ဖြစ်နေမှန်းသိ၍မဟာမိတ်စည်းကိုစောင့် ထိမ်းသောအားဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုများမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။
ဤစာရရခြင်းကယန်းပြည်သစ်တပ်မတော်နှင့်လာရောက်တွေ့ဆုံရန်တမောခိုကျေးရွာသို့ယခုလာ သည့်ဆက်သားနှင့်တပါတည်းလိုက်ခဲ့ပါရန်-ဆိုသည့်ကယန်းတပ်ဖွဲ့မှူး၏လက်မှတ်ဖြင့်ဆင့်ခေါ်သည်။ထိုစာ ကြောင့်ကျနော်တို့အလုပ်အဖွဲ့မှခေါင်းဆောင်နှင့်ရဲဘော်တစ်ဦးသွားရောက်တွေ့ဆုံပါသည်။နောက်တစ်နေ့ ထိုနှစ်ဦးပြန်မရောက်လာပါ။ကြားရသည့်သတင်းအရကယန်းပြည်သစ်မှကျနော်တို့ရဲဘော်နှစ်ဦးကိုလက်ပြန်ကြိုး တုတ်၍ဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရသည်။ထိုနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးသည့်နေရာမှာအလယ်ချောင်းရွာ။ကင်းလိုက်ကြော၌ ဖြစ်သည်။၄င်းတို့မှအချက်(၇)ချက်ပါသည့်အတိုင်း-
ဖွဲ့ အစည်းများသို့ ပြန်ခွင့်ပြုမည်။
(၇)ကယန်းပြည်သစ်တာဝန်ရှိသူများ၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆက်သွယ် ခွင့်မပြုလုပ်ရ- ဟုပါရှိပါသည်။
ထိုအချက်များကို ရဲဘော်တိုင်းဖတ်ကြားသိစေပြီး အလုပ်အဖွဲ့ ဆွေးနွေးပွဲထိုင်ဖြစ်သည်။ကေအန်ယူတပ်မဟာ(၂)သို့နဂိုကဆုတ်ခွာရန်ရွေးချယ်ထားသော်လည်းရန်သူနှင့်ဖောက်ပြန်ရေးအဖွဲ့များမှဆုတ်ခွာမည့်လမ်းကြောင်းများ ကိုတပ်အင်အား အခိုင်အမာဖြင့်ချထားကြောင်းသိရသည်။ထို့ကြောင့်ပထမဆုတ်ခွာမည့်လမ်းကြောင်း အစီအစဉ် မအောင်မြင်ခဲ့။
မကဒတအလယ်ပိုင်းအလုပ်အဖွဲ့သည်ကယန်းပြည်သစ်ပါတီ၏ထုတ်ပြန်ချက်သဘောထားအတိုင်းကယန်း ပြည်သစ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနယ်မြေ၏အချိန်ကာလတစ်ခုအထိရပ်တည်လှုပ်ရှားရန်အတွက်ယခုကယန်း ပြည်သစ်နယ်မြေထဲသို့ကျနော်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။အလယ်ချောင်းရွာတွင်ကယန်းပြည်သစ်အတွင်းရေး မှူး ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းမှဝမ်းပန်းတသာဖြင့်ကျနော်တို့ အားကြိုဆို၏၊၄င်းတို့၏ဒေသတွက်ခေါင်ရည်များဖြင့်တည် ခင်းဧည့်ခံကြသည်။
-ကျနော်တို့အပစ်အခတ်ရပ်စဲရတဲ့ သဘောကလည်း ကျားနဲ့ နွားနဲ့ ပေါင်းထားရတဲ့ သဘောပေါ့ဗျာ၊
-အခုလို အပစ်အခတ်ရပ်စဲ လိုက်ရတော့ ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေလည်း ပေါ်တာ အဆွဲမခံရ တော့ဘူး၊
-ကိုယ့်တောင်ယာ ကိုယ် အေးအေးချမ်းချမ်း လုပ်ကိုင် စားသောက် နိုင်တာပေါ့၊
-နယ်မြေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်နအဖကကျနော်တို့ကိုစာသင်ကျောင်း။ကားလမ်း။ဆေးခန်းတွေ ဖောက်လုပ်။ဆောက်လုပ်ပေးဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်၊
-နိုင်ငံရေးစကားကိုတော့ယခုအချိန်မှာသူတို့ ကကျနော်တို့ ကိုပြောခွင့်မပြုသေးဘူးလို့သိရတယ်၊
-ခုချိန်ဟာဒေသဖွံ့ ဖြိုးရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ ကိုသာလုပ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်၊
ကယန်းပြည်သစ်ဒေသမှာအများအားဖြင့်ကယန်းလူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ကရင်နှင့်ကယန်းနယ်မြေအစပ်တွင် ကယန်းလူမျိုးအနည်းစုနှင့်ကယန်းဒေသနေထိုင်သူကရင်လူမျိုးအများစုလည်းနန်းချိုချောင်းနဘေးတွင်တောင် ယာ၊ဥယျာဉ်လုပ်ငန်းဖြင့်လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ကြသည်။အများစု မှာ ရိုမန်ကက်သရစ်ဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။သဲပျော်ရွာတွင်နအဖဖောက်လုပ်ထားသောမြေညီခြောက်ပေကားလမ်းတစ်ခုတွေ့ရသည်။ထိုကား လမ်းသည်ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်သာကားအသွားအလာရှိပြီး။မိုးတွင်ကျလျင်ကားသွားလာ၍မရပါ။
ကျောင်းတွေမှာလည်း အခြေခံပညာမူလတန်း အဆင့်မျှသာဖွင့်လှစ်ပေးထားတာကိုတွေ့ ရသည်။
ဒေသခံလူထုမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိသည်။ရွာများမှဒေသခံတိုင်းရင်းသားကယန်းလူထုမှာဈေး ဝယ်ရာတွင်ရွာမှတစ်ညအိပ်ခြေကျင်သွားရသည်။သောက်ရေခပ်၊လိပ်သိုလ်၊တောင်ငူမြို့များသို့ခြေကျင်သွားရ သည်။အထူးသဖြင့်သူတို့နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရသည့်လုပ်ငန်း မှာတောင်ယာခုတ်ခြင်းအဓိကဖြစ်သည်။
တောင်ယာများကိုခုတ်ဖန်များသောအခါတောင်ယာများမှာနာလန်မထူဖြစ်ကြရသည်၊သစ်ကြီး၊ဝါးကြီးပင်များမှာ ရှားပါးသလောက်ဖြစ်နေသည်။အချို့ ရွာများတွင်စိမ်းလန်းစိုပြည်သည့်သစ်တောများမရှိမှုကြောင့်ရေရှားပါးမှု များဖြစ်ကြရသည်။အချို့တောင်တန်းများမှာတောင်ယာခုတ်ဖန်များသောကြောင့်နောက်သစ်ပင်များမပေါက်နိုင် တော့ပဲတောင်ကတုံးကြီးများဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရသည်။လူနေမှုအဆင့်အတန်းမှာလည်းအလွန်မှနိမ့်ကျပါသည်။
ကျန်းမာရေးပညာပေးလုပ်ငန်းများအားနည်းမှုကြောင့်ဝမ်းကိုက်ရောဂါ၊ငှက်ဖျားရောဂါကြောင့်သေဆုံးမှုအများ အပြားရှိကြပါသည်။အချို့ ရွာသားများမှာဒေသအတွင်းစီးပွားရေးမယ်မယ်ရရမရှိသည့်အတွက်မိုးကုတ်သို့ ထွက်၍ ကျောက်တွင်းတူးသည့်အလုပ်များသွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
မကဒတအလုပ်အဖွဲ့သည်ကယန်းပြည်သစ်ဗဟိုကော်မီတီများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရ သည်။ကယန်းပြည်သစ်ပါတီဥက္ကဌမှာငိန်းကယန်းထန်(ဝါ) ဦးရွှေအေးဖြစ်သည်။
၁၉၆၂ခုနှစ်မှစ၍တောခိုသောတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ကယန်းလူမျိုးလွတ်မြောက် ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးတာဝန်ကိုတက်ကြွစွာထမ်းဆောင်ခဲ့သောလူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ် သည်။ဥက္ကဌဦးရွှေအေးမှာအပစ်အခတ်ရပ်ပြီးနောက်ပိုင်းသိကျိတ်ရွာ၌ဒေသခံကယန်းတိုင်းရင်းသားများနှင့် အတူလယ်ယာများလုပ်ကိုင်ထွန်ယက်နေတာကိုတွေ့ ရသည်။
ဒကစ(ဒေသကွပ်ကဲရေး စစ်ဦးစီး)နှင့်ကယန်းပြည်သစ်တပ်မတော်စစ်ဦးစီးတို့မှာလွိုင်ကော်၌မကြာခဏတွေ့ဆုံ စကားပြောကြသည်။လွိုင်ကော်တွင်ထောက်လှမ်းရေး(၂၇)ရှိ၏။ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိများမှယခုတဖန် ကယန်းပြည်သစ်တွင်ရောက်ရှိနေသောကျောင်းသားများကို၎င်းတို့ထံအပ်နှံရမည်ဟုဖိအားပေးအကြပ်ကိုင်လာ သည်။
ထိုအခါကယန်းပြည်သစ်ဗဟိုကော်မီတီမှပထမအကြိမ်၌ယခုရောက်ရှိနေသည့်ကျောင်းသားများမှာကယန်းပြည် သစ်ပါတီ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်၌ ရှိ၍နအဖထံအပ်နှံဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်းတုံ့ ပြန်ခဲ့သည်။
ကယန်းပြည်သစ်ဒေတွင်ရောက်ရှိနေသော-အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ်-တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုကယန်းပြည်သစ် ဒေသအတွင်းမှရက်ပိုင်းအတွင်းမရှိရေးတို့ ဖြစ်သည်။
ထောက်လှမ်းရေး(၂၇)မှပြောရာတွင်လက်ရှိဒေသအတွင်းမှာရှိသည့်ကျောင်းသားများကို၎င်းတို့လက်တွင်းသို့ အပ်လျင်အပ်၊မအပ်လျင်၎င်တို့ကိုယ်တိုင်ဒေသအတွင်းသို့ဝင်ပြီးတပ်အင်အားဖြင့်ဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရလိမ့် မည်ဟုဖိအားပေးခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်-မကဒတအလယ်ပိုင်းအလုပ်အဖွဲ့ရဲဘော်များသည်သိကျိတ်ရွာတွင်အရေးပေါ်ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ပြီး ခရီးထွက်ရန်အလျင်အမြန်ပြင်ဆင်ကြရတော့သည်။အချို့ရဲဘော်များမှာဒေသအတွင်း၌တောင်ယာများခုတ်ပြီး စပါးရိတ်ရန်အသင့်ဖြစ်နေချေပြီ။ထိုစပါးများရိတ်သိမ်းခွင့်မရပဲခရီးထွက်ရတော့မည်။
အလယ်ပိုင်းဒေသတွင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သည့်သေနတ်များကိုယခုလိုကယန်းဒေသမှပြန်ထွက်ခွာရာတွင်ကယန်းပြည် သစ်ပါတီကလက်နက်များ၊ကျည်ဆံများ၊ယူဆောင်သွားခွင့်မရှိဟုသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ရဲဘော် များသည်မိမိတို့တိုက်ပွဲဝင်သေနတ်များကိုယူဆောင်သွားချင်သော်လည်းယူဆောင်ခွင့်မရသည့်အပေါ်ဝမ်းနည်း မှုများဖြင့်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့်ဥက္ကဌငိန်းကယန်းထန်(ဝါ)ဦးရွှေအေးရုံး၌သေနတ်များအပ်နှံလိုက်ရသည်။ ရဲဘော်အချို့ လူမမြင်သည့်နေရာများတွင်ဝမ်းနည်းဆို့တဲ့စွာငိုကြွေးနေကြသည်။
မကြာမီ-ဖိုးဝိကားအဖြူကြီးကဖင်ထိုး၍ခရီးထွက်ရန်စောင့်နေ၏။ကျနော်တို့အားလုံးကားပေါ်သို့ကိုယ်စီတက် လိုက်ကြသည်။ကယန်းပြည်သစ်ရဲဘော်အချို့မှာကျနော်တို့ကိုကြည့်၍ဝမ်းနည်းစွာဖြင့်နှုတ်ဆက်ကြသည်။ သိကျိတ်ရွာမှဤအကြောင်းသိပြီးသားရွာသားအချို့ဒေသထွက်ခေါင်ကျရည်ပုလင်းများလက်ဆောင်ပေးလာကြ သည်။ညနေနေဝင်စအချိန်။သိကျိတ်ရွာမှကားထွက်စပြုပြီ၊ဖိနပ်မပါပဲမျက်ရည်သုတ်ပြီးပြေးလိုက်လာသော ရဲဘော်ကြီးတင်ဝင်းအသံက“-ညီလေးရေ-သွားနှင့်ဦးကွာ။တို့ရှစ်လေးလုံးညီအစ်ကို တတွေ။တစ်နေ့ပြန်ဆုံကြဘို့ဆုတောင်းကွာ-”ဟုငိုသံကြီးနှင့်နှုတ်ဆက်ဝမ်းနည်းသံ-ကြားနေမိ။လမ်းတလျှောက်၌တောစံပယ် အရိုင်းနံ့များ၊ညမွှေးပန်းရနံ့များ၊နှင်းခိုးမြူမှုံတွေပတ်လယ်ဝိုင်ထားသည့်တောင်တန်းတွေကိုနဂါးကြီးတစ်ကောင် က ပါတ်ခွေထားသည့်အလား--ယနေ့ အထိ ထိုမြင်ကွင်းတွေကကျနော့်မျက်ဝန်းအိမ်ထဲက ထွက်မသွားသေးပါ။
ကယန်းပြည်သစ်ရောက်မကဒတတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ သည်လွိုင်ကော်ထောက်လှမ်းရေး(၂၇)၏ဖိအားပေးမှုကြောင့် (၂၅)ရက်၊အောက်တိုဘာ၁၉၉၈တွင်ကားဖြင့်လွိုင်ကော်နှင့်လိပ်သိုလ်အကြားကားလမ်းသို့လိုက်ပို့ပေးသည်။ ထိုကားလမ်းမှကျနော်တို့ ဖြတ်ဆင်းပြီး ဒေါလီရွာသို့ ရောက် သည်၊ ၄င်းရွာ တွင် တညအိပ်ပြီး နံနက်မိုးမလင်းမှီ ခရီးထွက်ဘို့ ပြင်ဆင်ကြသည်။ကျနော်တို့ ခရီးထွက်ရမည့်လမ်းကြောင်းမှာကလလတ-အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေသို့ ဖြစ်သည်။မူရင်းလမ်းအတိုင်းသွားလျင်နေ့ဝက်နှင့်ရည်မှန်းချက်သို့ရောက်နိုင်သည်။သို့သော်သတင်းပေါက်မည် စိုး၍လမ်းကြောင်းအတိုင်းမသွားပဲတောတိုး၍ခရီးတွက်ရသည်။ကယန်းပြည်သစ်ဒေသအစပ်နှင့်ကလလတ- ဒေသအစပ်အကြားတောင်များမှာမြင့်မားမို့မောက်လှသည်။တခါတရံမတ်စောက်လှ၏။အတက်ဆိုးလှသော တောင်များမှတဆင့်ခက်ခက်ခဲခဲပြန်ဆင်းပြီးချောင်းကြို၊ချောင်ကြားတွေကို ဖြတ်ကျော်ရပြန်သည်။
ကျနော်တို့ခရီးထွက်တွင်ဒီနေ့အဖို့အရောက်ချီတက်ရမည့်နေရာမှာကလလတအတွင်းရေးမှူးဗိုလ်မှူးရွှေဝါ သစ်တောရုံးသို့ဖြစ်သည်။ကျနော်တို့အဖွဲ့အားလမ်းပြအဖြစ်ကယန်းပြည်သစ်ဥက္ကဌရုံးမှရဲဘော်အောင်ကျော်မှဦး ဆောင်သည်။တောင်ကြောရေစပ်များတွင်ကျွန်းသစ်တုံးကြီးများအစီအရီတွေ့ရသည်။ခရီးထွက်နေစဉ်အတွင်း ခပ်ဝေးဝေးတောင်ကြောများအပေါ်မှကားသံအချို့ ကြားရသည်။
ထိုကားသံသည်ရာဒိုသို့သွားသောကားဖြစ်ကြောင်းလမ်းပြရဲဘော်မှရှင်းပြသည်။ကျနော်တို့အဖွဲ့တွင်အိမ်ထောင် သည်(၂)ဦးပါသဖြင့်ခရီးထွက်ရာတွင်အတော်အခက်အခဲဖြစ်ရသည်။ရဲဘော်တစ်ဦး၏ဇနီးမှာကိုယ်လေးလက် ဝန်ကြီးဖြင့်ကလလတသစ်တောရုံးသို့ည(၁၉းဝဝ)နာရီလောက်မှရောက်ကြသည်။သစ်တောရုံးသို့မရောက်မှီ ရေစီးကြမ်းသည့် ထူးချောင်းကြီးကို ဖြတ်ကူးရသည်မှာအသဲတအေးအေး ဖြစ်မိသည်၊
ကျနော်တို့အဖြေင့်ကူးနိုင်သော်လည်းအိမ်ထောင်သည်ရဲမေ(၂)ဦးကူးမှကူးနိုင်ပါ့မလားလို့ရင်တမမဖြင့်တဘက် ကမ်းမှစောင့်ရင်းကြည့်နေမိသည်။ရဲဘော်များမှရဲမေ(၂)ဦးအထုတ်အပိုးများကိုခွဲဝေယူဆောင်ကြပြီး၎င်းတို့ (၂)ဦးအလွယ်အပိုးမပါဒီအတိုင်းကူးစေသည်။ရဲမေ(၂)ဦးမှာစိတ်ဓါတ်ခိုင်မာစွာဖြင့်ထူးချောင်း၏ရေစီးကြမ်းလှသော အခက်အခဲကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြသည်။ထိုတစ်ညပင်ပန်းနွမ်းနယ်စွာအိပ်စက်အနားယူလိုက်ကြသည်။
ကျနော်တို့အဖွဲ့မှာကလလတသစ်တောရုံးတွင်(၅)ရက်မျှနေထိုင်အနားယူကြပြီးအောက်တိုဘာလ(၂၉)ရက်နေ့ ။ နံနက်(၉းဝဝ)နာရီတွင်ရှေ့ ခရီးဆက်ကြသည်။
လမ်းခရီးလုံခြုံရေးအတွက်သေနတ်(၅)လက်ကိုယူဆောင်ခဲ့သော်လည်းထိုသစ်တောရုံးမှထားခဲ့ရမည်ဆိုပြန် သောကြောင့်ထားခဲ့ရပြန်သည်။မြတ်နိုးယုယစွာထွေးပိုက်ခဲ့ရသောသေနတ်နှင့်ကျည်ဘောက်အချို့ကိုနောက်ဆုံး အလေးပြု၍ပေးလိုက်ရပြန်သည်။စိတ်ထဲနစ်နစ်သည်းသည်းခံစားလိုက်ရသည်။လမ်းပြမှာယခင်လမ်းပြမဟုတ်ပဲ ရဲဘော်တစ်ယောက်မှပို့ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးဒေသအတွင်းရှိရွာများ၏အမည်များကိုမေးရင်းစကားတပြောပြောနှင့်တောတွေကိုတတောပြီး တတောတတောင်ပြီးတတောင်ကျာ်ဖြတ်နေရသည်။ဟာအို(ပလဲ့)၊ဝယ်ဒိုးသာ(ရွာသစ်၊ရွာဟောင်း)၊ယူလီးခို (ဂေကော)ဂိတ်စခန်းစသည့်ရွာများဖြတ်ပြီးယူလီးခိုတွင်ကျနော်တို့အဖွဲ့ နားကြ သည်။
ယူလီးခိုရွာအရှေ့ဘက်တွင်နွားကုန်သည်များစခန်းချအနားယူသည့်ဝါးတဲတစ်ခုတွင်စခန်းချစေသည်။ညဘက် အိပ်လို့တိတ်ဆိတ်၍အိပ်မောကျချိန်လောက်တွင်ဝါးတဲတဘက်တချက်မှချုံနွယ်များကိုတိုးပြီးအုပ်လိုက် တောတိုးသံကြားရ၍ရဲဘော်များအားလုံးအလန့်တကြားဝါးတဲပေါ်မှထ၍လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းထွက်ပြေးကြကုန် သည်။အမှန်ကချုံတိုးလာသောအသံမှာရန်သူမဟုတ်ပဲနွားများဖြစ်နေ၍ ငိုအားထက်ရယ်အားသန် နေမိသည်။
သို့သော်ထိုသို့အဖြစ်မျိုးနွားမဟုတ်ပဲရန်သူသာအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျင်ကျနော်တို့၏ဘဝမှာရန်သူ၏ သေနတ်သံအောက်မှာအသက်အားလုံးပျောက်သွားကြမည်ကိုတွေးရင်းဖြင့်ဝမ်းနည်းအားငယ်မှုများဖြစ်ခဲ့ရ သည်။
ကျနော်တို့အဖွဲ့သည်ယူလီးခို(ဂေကော)ဂိတ်စခန်းမှနိုဝင်ဘာလ(၃)ရက်၁၉၉၈၊နံနက်(၇းဝဝ)နာရီတွင်ခရီး ဆက်ကြရာလိုဒေး၊ဘေခီး၊လပါခီးရွာများသို့ဖြတ်ကျော်ရသည်။ကလလတဒေသသည်လည်းကယန်းပြည်သစ် ဒေသလိုပဲတောင်များမှာတောင်ယာများအထပ်ထပ်ခုတ်ထား၍သစ်ကြီးဝါးကြီးပင်များမတွေ့ရသလောက်ရှားပါး သည်။ဘရယ်စော်ရွာဝသို့ကျနော်စတင်ဝင်ရောက်ရာတွင်စစ်ယူနီဖောင်းနှင့်အဖွဲ့တဖွဲ့ကိုအိမ်တစ်အိမ်၌တွေ၍ နေ၏၊ပထမရင်ထဲထိတ်သွားသည်။ရန်သူ့တပ်များဖြစ်နေမလား၊လေးဆယ်မမကျည်တွဲအီကွန့်မင့်ကိုတဲ၏ ဝါးအစွန်းတွင်ချိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ ရသည်။အီကွန့်မင့်တွင်ပုဝါအနီကိုလည်းတွေ့ ရသည်။ကျနော့်မှာရှေ့သို့ ဆက်မတိုးရဲပဲလမ်းပြဖြစ်သူအားနောက်လှည့်သတင်းပို့သည်။လမ်းပြမှစက်ဖွင့်၍ထိုအဖွဲ့အားဆက်သွယ်ရာ ထိုအဖွဲ့ မှာရန်သူ့ အဖွဲ့ မဟုတ်ပဲကေအန်ပီပီမှလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ ဖြစ်နေမှန်းသိရသည်။
ကျနော်တို့အားယခုလာသည့်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှေ့ဆက်မတိုးဖို့အကြံပေးသည်။ဖားဆောင်းဂွင်တွင် ကျနော်တို့သတင်းကိုအတိအကျရထားသောရန်သူမှတပ်များအခိုင်အမာချထားကြောင်းသိရ၍ထိုခရီးကိုရှေ့ဆက်ဖို့ မစဉ်းစားတော့ရန် ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးတိုင်ကြသည်။ထို့ ကြောင့် ထိုခရီးမဆက်ပဲ လမ်းဘေးတောင်ယာတဲတညနားလိုက်ကြ သည်၊ ထိုတစ်ညရေမရှိ၍ တမင်းတနပ် ငတ်ခဲ့ ကြသေးသည်၊
ထိုဒေသတွင်ကေအန်ပီပီမှနယ်မြေခံများနှင့်ကလလတ နယ်မြေတာဝန်ခံ များမှာ နားလည်မှု ရယူထားကြသည်၊
ကေအန်ပီပီကလည်းကလလတရဲဘော်များကိုမလွဲမရှောင်သာမှတွေ့ခဲ့ရင်တောင်တိုက်ပွဲမဖြစ်ရန်။ ကလလတကလည်းကေအန်ပီပီတပ်များလှုပ်ရှားသွားလာကြတာကိုတွေ့လျင်တိုက်ပွဲမဖော်ဆောင်ရန်ညွှန်ကြား ထားသည်ဟုသိရသည်။ထိုနယ်မြေမှာကေအန်ပီပီနှင့်ကလလတ(၂)ဖွဲ့၏ဆုံချက်အကောက်အခွန်ဒေသများ ဖြစ်ကြသည်။ထို့ ကြောင့်အကျိုးစီးပွားအရရေရှည်အကျိုးကိုမျှော်ကိုးပြီးတိုက်ပွဲမဖြစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ကရိန်နီလမ်းကြောင်းအတိုင်းခရီးထွက်ဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။နောက်ထပ် လမ်းကြောင်းစဉ်းစားရာတွင်ယခုကရိန်နီနယ်စပ်တောင်ကြောများကိုဖြတ်ပြီးအနောက်တောင်ထောင့် ကေအန်ယူဒေသသို့ ဖြတ်ချိုးဝင်ရန် စဉ်းစား ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြသည်၊
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရန်သူ့အခြေအနေနှင့်ကျနော်တို့၏ခရီးစဉ်ကိုသတင်းမပေါက်ကြားအောင်လျို့ဝှက်စွာ ထွက်ခွာရန်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။(၂၇)ရက်။နိုဝင်ဘာ၁၉၉၈ နေ့တောသီးဖိုရွာမှစထွက်ရာ(၂၉)ရက်နိုဝင် ဘာ၁၉၉၈နေ့တွင်ကရိန်နီထိန်းချုပ်ရာမီးခါးတဲရွာသို့ရောက်ရှိသည်။လမ်းခရီးတွင်ရွာအချို့မှာရန်သူမှမီး ရှို့ ထား၍ အိမ်တိုင်များမှာမီးကျွမ်းထား၍မီးသွေးချောင်ကြီးတွေအလားတွေ့ ရ၏၊ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများမှာယိုယွင်း ပျက်စီး၍ချုံနွယ်များအကြားတည်ရှိနေတာတွေ့ရပြန်သည်။ဘုရားကျောင်းထဲတွင်အိမ်မွေးဆိတ်များ၌ ချေတုံးများ၊သခင်ယေရှု့ ရုပ်ပုံကားချပ်မှာ ယိုယွင်း ပျက်စီး နေတာတွေ့ ရှု စိတ်မကောင်းဖြစ်မိရုံ ကလွဲပြီး ဘာများတတ်နိုင် ဦးမှာလဲ၊နာမည်ကြီးလှသည့်ဘွီးကော်ဘွားခီးတောင်ကြောကိုအဝေးမှလှမ်းတွေ့နေရသည်။ကျနော်တို့အဖွဲ့ဘွီး ကော်ဘွားခီးသို့(၂းဝဝ)နာရီကျော်မျှသွားရသည်။ထိုတောင်သို့မရောက်မှီမီခါးဒေး(ရွာပုန်း)ရွာမှာပဲစခန်း ချဖြစ်သည်။မီးခါးဒေးရွာတွင်စခန်းချစဉ်။ရွာထဲလှည့်ပတ်အကဲခတ်လေ့လာရာတွင်ကရင်တိုင်းရင်းသား များမှာ ဆင်းရဲကြပ်တည်းစွာဖြင့်လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ရသည်ကိုတွေ့ ရသည်။ရွာတွေကိုစစ်တပ်မှ မီးရှို့ ပြီးနောက် ရွာသားများမှာယခင်ရွာထဲ၌မနေလိုကြတော့ပဲရွာပုန်းများအဖြစ်စုဖွဲ့ နေထိုင်ကြရသည်။
ရွာပုန်းများတွင်အခြေခံပညာရှိသောကျောင်းဆရာ၊တစ်ယောက်စ၊နှစ်ယောက်စ၊နှစ်ယောက်စမှရွာထဲမှ ကလေးများကိုပညာသင်ပေးကြရသည်။ထိုကလေးများမှာကျနော်တို့ကိုတွေ့လျင်ကျနော်တို့ မှဗမာစကားပြော၍ အတော်ကြောက်ရွံ့ နေပုံရသည်။ခေတ်၏ဆိုးကျိုးများကိုကလေးတွေခါးသည်းနာကျည်းစွာခံစားနေရသည်ကို ကြည့်ရင်းကျနော်၏ရင်ထဲနင့်သည်းစွာခံစားရသည်။ရွာသားများမှာ၎င်းတို့တောင်ယာထွက်သီးနှံများကို နောက်လွယ်ပုလိုင်းထဲသို့ကိုယ်စီထည့်၍မနက်ခရီးထွက်ဘို့ပြင်ဆင်နေကြသည်ကိုကြည့်ရင်းမေးမြန်းကြည့်မိရာ မနက်တွင်ရာဒိုသို့ခရီးထွက်ပြီးယခုသီးနှံများကိုမြို့ပေါ်တွင်ဆားဖြင့်လည်းကောင်း၊လဲလှယ်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်ဟုသိရ၍ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း၏အခက်အခဲကိုဤဒေသတွင်တွေ့ရပြန်သည်။မူခါဒေးရွာ၏ အရှေ့တည့်တည့်ဘွေမိုခီးဆိုသည့်တောင်ကြောပေါ်တွင်ကားလမ်းဖောက်လုပ်ထားသည်ဟုသိရသည်။ ထိုကားလမ်းမှာတောင်ငူ၊မော်ချီး၊ဖားဆောင်း၊လွိုင်ကော်စသည်မြို့များသို့စစ်သုံးကားလမ်းအဖြစ်ဖောက် လုပ်ထားသည်။
မီးခါးဒေးရွာတွင်နေစဉ်။ကေအန်ယူဒေသ၊ခရီးလမ်းကြောင်းစကားစမြည်မေးမြန်းတီးခေါက်ကြည့်သည်။ လက်ရှိရွာနှင့်ကေအန်ယူတပ်မဟာ(၂)သံတောင်မြို့ နယ်အတွင်းရှိ ရှိခိုရွာမှာခြေကျင်လျှောက်သော်(၆)နာရီခန့်သွားရမည်ဟုဒေသခံတစ်ဦးမုပြောပြသည်။ရှိခိုနှင့်အနီးတဝိုက်မောသူးတဲရွာဘက်တွင်သံတောင်မြို့နယ်ကေအန် ယူလှုပ်ရှားတပ်ဖွဲ့ များလှုပ်ရှားနေသည်ဟုသတင်းရသည်။ထိုဒေသများမှာကျနော်ကျင်လည်ခဲ့ဘူးသော ဒေသများဖြစ်၍စိတ်ထဲဝမ်းသာမိသည်။
Posted by victorOway at 8:44 AM No comments:
Posted by victorOway at 10:47 AM No comments:
ကြွံဖွတ်ပါတီလာချေပြီ(- ၈ - ၂၀၁၀)
ဥပဒေတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် ပါတီတွေကို လက်ပြန်ကြိုးချည်ပြီးပြီ။ ပါးစပ်ကို ပိတ်ပြီးပြီ။ နိုင်ငံရေး မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုသူတွေကလည်း 'အာဏာရပါတီ' အတွက် အမျိုးမျိုး ရှေ့နေလိုက်ပေးပြီးကြပြီ။ နိုင်ငံရေးက ရာသက်ပန် နားပါပြီဆိုတဲ့ ဗိုလ်အောင်ကြီးကတောင် "ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကို လွယ်လွယ်နဲ့ ပြင်တာဖြည့်တာ လုပ်မရဘူး" တဲ့။ (လွယ်လွယ်နဲ့ ဖျက်လို့တော့ ရတယ်။ '၁၉၄၇အခြေခံဥပဒေ' ကို သူနဲ့ဗိုလ်နေဝင်းတို့ ဖျက်ခဲ့တာပ။ဲ ) 'လက်ရှိတပ်မတော်န့ဲ အပြန်အလှန်ယုံကြည်အားပေးနိုင်တဲ့ ပါတီကပဲ အာဏာရစေရမယ'်တဲ့။ (ကြံ့/ဖွံ့ ပါတီ နိုင်စေရမယ်လို့ပဲ ခပ်ရှင်းရှင်းပြောလိုက်ပါတော့။)'နိုင်ရမယ် ကြုံးဝါးသံနဲ့ ထွက်လာတဲ့ ကြံ့/ဖွံ့ ပါတီ။ဆွေငြိမ်းတို့လို 'ရှုံးရင်လည်း နိုင်ရမယ်' လို့တောင် မပြောဘူး။ 'နိုင်ရမယ်' လို့ပဲပြောပြီး ကြံ့/ဖွံ့ ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့မယ်။'ဆင်နဲ့ဆိတ်ပြိုင်ပွဲ' မှာ ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာ တွက်နေစရာမလိုတော့ဘူး။ ကြံ့/ဖွံ့ ပဲ နိုင်မှာပါ။ ယှဉ်ပြိုင်သူ မရှိတဲ့နေရာ တော်တော်များများမှာသူတို့ပဲ နိုင်မှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲ။ တခြားပါတီတွေက နောက်ဆုတ်နေကြပြီ။ 'တစည' ကတောင် အပြောလျှော့လာပြီ။ မတရားဘူးလို့ပြောပြီးလုံးလုံးနောက်ဆုတ်တဲ့ ပါတီလည်း ရှိလာမယ်။ အဲဒီလိုလုပ်တာ မှန်တယ်။ ငွေ (၅) သိန်း ဘာကြောင့်အဆုံးခံကြမလဲ။ တခြားရွေးကောက်ပွဲစရိတ်ကလည်း ရှိသေးတယ်။ရပ်တည်မ@ှု ပျက်သူတို့ရဲ့အသံ။NDF ခေါင်းဆောင်တယောက်ကတော့ 'နိုင်ရမယ်' ကြုံးဝါးသံနဲ့ ထွက်လာတဲ့ ကြံ့/ဖွံ့ ကို ဘာမှမပြောဘူး။ NLD က ရွေးကောက်ပွဲသပိတ်မှောက်ရေးလုပ်တာကိုပဲ အပြစ်ပြောတာ ကြားလိုက်ရတယ်။ဒါဟာ ရပ်တည်ချက်ပျက်သူတေရွ့ဲ စဉ်းစားနည်း၊ ပြောနည်း၊ လုပ်နည်းပ။ဲ ရပ်တည်ချက်ပျက်ပြဆီိုရင်ဒီလိုပဲဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။အလံနီဂိုဏ်းကိုကြည့်။ ဗကပ ထဲ ခဏတဖြုတ် ဖြတ်လျှောက်ဖူးသူတွေကိုလည်းကြည့်။ တဖက်က တင်းနေရင် ကိုယ့်အတွင်းမှာပဲ တရားခံရှာကြတာပဲ။ လက်နက်ချကြတာပဲ။လုပ်စရာတွေ များတယ်။'ရွေးကောက်ပွဲလွန်' ကာလမှာ လုပ်စရာတွေ များပါတယ်။ ရပ်တည်မ@ှုပြHနာမှာတော့ ရွေးစရာက (၂) ခုပဲ ရှိတယ်။ အာဏာပိုင်လုပ်သမျှ ငုံ့ခံမလား၊ ခုခံတွန်းလှန်မလား။ ဒီ (၂) ခု ရွေးစရာ ရှိတယ်။နည်းနာဆိုင်ရာပြHနာမှာတော့ ရွေးစရာတွေက အများကြီးပဲ။ ကိုယ့်အနေအထားအရ ကိုယ်ဘာလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုရွေးကြရမှာပါ။ NLD လုပ်နိုင်တာကို ဗကပ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ဗကပ လုပ်နိုင်တာကိုလည်း NLD မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ တခြားပါတီတွေ၊ အင်အားစုတွေလုပ်နိုင်တာလည်း NLD ရော၊ ဗကပ ပါ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်သန်ရာသန်ရာကိုပဲ ရွေးပြီးလုပ်ကြရမှာပဲ။ ဦးတည်ချက်မှန်နေသမျှတော့ဘာပဲလုပ်လုပ် မှန်တာချည်းပါ။အခြေအနေကောင်းတယ်။ဗိုလ်နေဝင်းတို့က 'ဆန္ဒခံယူပွဲ' လုပ်ပြီး ချက်ချင်းပဲ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဝံ့တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တကောင်တည်း ပြိုင်တဲ့မြင်း။သူပဲနိုင်မှာ သေချာလို့ပဲ။ဗိုလ်သန်းရွှေတို့ကတော့ 'ပါတီစုံ' တို့၊ 'ဒီမိုကရေစီ' တို့ ပြောနေရတယ်။ ဒါကြောင့် 'ဆန္ဒခံယူပွဲ' နဲ့ 'ရွေးကောက်ပွဲ' ကို နှစ်တွေအကြာကြီးခြားပြီး လုပ်ရတယ်။ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ နေဝင်းရော၊ သန်းရွှေပါ (၉၀%) ကျော် ထောက်ခံမ@ှုရအောင် လုပ်ခဲ့နိုင်ကြတာပဲ။ ဒါပေမဲ့အခြေအနေချင်းက မတူဘူး။အခြေအနေချင်း မတူတာတွေ။နိုင်ငံတကာ့အခြေအနေ မတူဘူး။ ပြည်တွင်းအခြေအနေ မတူဘူး။ သန်းရွှေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေက နေဝင်းတုန်းကနဲ့လုံးဝမတူဘူး။ နိုင်ငံတကာက ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးကို မျက်စိဒေါက်ထောက်ပြီး ကြည့်နေကြတာ။ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကလည်း ရှိနေတယ်။ 'ပါဝါအမာ' နဲ့ 'ပါဝါအပျော့' ရဲ့ လွန်ဆွဲပွဲကလည်း ရှိနေတယ်။ပြည်တွင်းအခြေအနေက ပိုပြီးမတူဘူး။ နေဝင်းရဲ့ '၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေ' ကို နယ်စပ်ရောက်နေတဲ့ ဗကပ တခုတည်းကပဲဖွင့်ချဝေဖန်တာ ရှိတယ်။ တခြား ဘယ်သူကမှ အရေးမလုပ်ဘူး။ 'ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေး' ဆိုတာန့ဲ 'မှောင်ခိုစီးပွားရေး' က ပြိုင်တူတည်ရှိနေတယ်။ 'မှောင်ခိုစီးပွားရေး' ကတောင် အထက်စီးရနေချိန်ပဲ။နိုင်ငံရေးအခြေအနေကျတော့ ပိုတောင်ဆိုးတယ်။ ဗကပ ပျက်တွေနဲ့ ပမညတ တွေက မဆလ 'အခြေခံဥပဒေ' ကို အလုပ်အကျွေးပြုနေကြတယ်။အနုပညာရှင်တွေဟူသမျှကလည်း နေဝင်းတို့ကို ထထကြွကြွပံ့ပိုးပေးနေကြတယ်။အခု သန်းရွှေတို့ကတော့ အဲဒီဟာတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်နေရတာ ဖြစ်တယ်။ စစ်းအစိုးရပိုင်သတင်းစာတွေမှာပြူးတူးပြဲတဲဖော်ပြနေတဲ့ ကြွေးကြော်သံ (ဆောင်ပုဒ်) တွေပဲကြည့်။ အဲဒါဟာ သူတို့တွေ့နေရတဲ့ အကျပ်အတည်းပဲ။လူထုဘယ်တော့မှ လက်ပန်းမကျဘူး။နိုင်ငံရေးသမားတွေပဲ လက်ပန်းကျတတ်တယ်။ လူထုက ဘယ်တော့မှ လက်ပန်းမကျဘူး။ အကောင်းဆုံးနဲ့ အနီးကပ်သာဓကကတော့ '၁၉၇၄ အလုပ်သမားလလှုပ်ရှားမှုပဲ။ 'အခြေခံဥပဒေ' အောင်ပွဲခံနေတဲ့ နေဝင်းတို့ကို ပထမဆုံးအန်တုလိုက်တာဟာ အလုပ်သမားလူတန်းစားပဲ။'၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ' ကို ဗွေဆော်ဦးအန်တုမှာကလည်း အခြေခံလူတန်းစားတွေပဲ ဖြစ်မှာပါ။ အလုပ်သမားလား။ လယ်သမားလား။မြို့နေဆင်းရဲသားလား။ တခုခုပါပဲ။ဗကပ ဘာလုပ်မလဲ။အနိမ့်ဆုံးဘုံလုပ်ငန်းစဉ် (MCP) အဆိုပြုချက်မှာ တင်ပြပြီးပြီ။ အဲဒီအလုပ်ကိုပဲ ဇောက်ချလုပ်မှာပါ။ မသွေမဖည် ဇွဲနဲ့လုပ်ပါမယ်။www.cpburma.org﻿
Posted by victorOway at 8:53 AM No comments:
ကျေးငှက်သံလေးတွေ စိုးစီစိုးစီနဲ့ အရုဏ်ဦးက စတင်အသက်ဝင်လာခဲ့ပြီ
ငါ့မျက်လုံးကို ဖြည်းညင်းစွာ ဖွင့်ဟလို့ မျက်နှာကြက်ကို မော့ကြည့်မိတယ်.
ငါ့ဘေးနားမှာ ငါ့ကို ချစ်တဲ့ငါ့ဖေဖေမရှိတော့တာလည်း ကြာပါပြီ.
ငါ့ကို သွန်သင်ဆုံးမပေးတတ်တဲ ငါ့မေမေမျက်ကွယ်ပြုသွားခဲ့တာလည်း
၁၉ နှစ်တောင် ရှိရော့ပေါ့
ငါ့ကို အနစ်နာခံ အလိုလိုက်တတ်တဲ့ ငါ့ခင်ပွန်းလည်း မရှိရှာတော့ဘူး
ငါသိပ်ချစ်တဲ့ ငါ့သားနှစ်ယောက်လည်း ငါနဲ့ ဝေးကွာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး.
ငါ့မွေးနေ့မှာ ငါ့ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးသွေးသားရင်းချာတွေကို ငါ့နားမှာ
ငါ့သားလေးနှစ်ယောက်ကို ငါ့နားမှာ ရှိစေချင်လိုက်တာ.
တကယ်တော့ ဒီလိုနေ့မျိုးဟာ လူတစ်ယောက်အတွက် အထိမ်းအမှတ်နေ့တစ်ခုပါ.
လူတိုင်းဟာ သူတို့မွေးနေ့ကို တန်ဖိုးထားအမှတ်ရနေပြီး အထူးတလည်ကျင်းပတတ်ကြတာပဲ
ငါလည်း ငါ့မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို ကျင်းပခဲ့ဖူးတာပေါ့.
အိန္ဒိယမှာ ငါချစ်တဲ့ ငါ့မေမေနဲ့အတူတူ
အောက်စဖို့မှာ ငါချစ်တဲ့ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ
အမေရိကန်မှာ ငါ့ရဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်း မသန်းအိတို့နဲ့အတူတူ
ဘူတန်မှာ ငါချစ်တဲ့ ငါ့ခင်ပွန်းနဲ့အတူတူ
အင်္ဂလန်မှာ ငါချစ်တဲ့ ငါ့မိသားစုနဲ့အတူတူ
ဒါတွေကို မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်း ငါတမ်းတမိနေတာ ၀န်ခံပါရစေ…
ငါ့ရဲ့ဘ၀ဟာ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်လျှမ်းခဲ့တာပါ.
ငါ့ကိုမွေးပြီး နှစ်နှစ်အကြာမှာပဲ ငါသိပ်ချစ်တဲ့ ငါ့ဖေဖေကို မလိုသူတွေက
အဲဒီ့နေ့က ရုံးကားကြီးတစ်စင်း အိမ်ရှေ့ကို ထိုးရပ်လာလို့
မေမေ့ကို လူတစ်ယောက်က အပြေးလာခေါ်လို့
မေမေ ဆံပင်ဖရိုဖရဲနဲ့ ပြေးလိုက်သွားလို့
ငါ့နဲ့ ငါ့အစ်ကိုတွေကို အိမ်မှာထားခဲ့လို့
ငါ့ကို ထွေးဖက်ထားတဲ့ ငါတို့အိမ်ဖော်မကြီးမှာလည်း မျက်ရည်တွေဝဲနေလို့ပါလား
အဲဒီ့နေ့က ငါတစ်ခုကိုတော့ မှတ်မိနေတယ်.
ညနေခင်းပြန်လာရင် ငါ့ကို အမြဲနမ်းရှုပ်ကျီစယ်တတ်တဲ့
နောက်ရက်တွေမှာ ငါတို့အိမ်မှာ လူတွေစည်ကားနေတယ်.
ငါတို့ မောင်နှမသုံးယောက်ကို မေမေက ထွေးဖက်ထားလို့ သူ့အနားမှာ နေနေစေတယ်.
လာတဲ့လူတိုင်းက မေမေ့ကို စကားတွေလာပြောကြတယ်.
အမျိုးသမီးကြီးတွေက မေမေ့ကို လာပြီး အားပေးကြတယ်.
ငါတို့ မောင်နှမ သုံးယောက်ကို ကြည့်နေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေမှာ
ငါသိတာတော့ အဲဒီ့နေ့က ဖေဖေ့ကို ငါသိပ်လွမ်းနေခဲ့တယ်…
ဘာလို့ သမီးတို့ကို ထားခဲ့တာလဲဟင်…
ဖေဖေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ သမီးတို့ အိမ်ကြီးမှာ ခြောက်ကပ်သွားတာပဲ.
သမီးတို့ရှေ့မှာ တည်ငြိမ်စွာနေတတ်ပေမယ့် ညအိပ်ရင် သမီးတို့ မသိအောင်
ကြိတ်ငိုနေတဲ့ မေ့မေ့ရဲ့ ရှိုက်သံတွေက သမီးရဲ့ ညပေါင်းများစွာကို
အိမ်ကလူတွေကို ပစ္စည်းတွေလိုက်သိမ်းခိုင်းနေတာလည်း ငါမှတ်မိတယ်.
ဘာလုပ်နေကြတာလဲ မေမေရယ်လို့ မေးတော့
မေမေက တည်ငြိမ်တဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ငါ့ကို ငုံ့ကြည့်ပြီး ချိုမြတဲ့လေသံလေးနဲ့
ငါ့ခေါင်းလေးပေါ်မှာ မေမေက သူ့လက်ကလေးကိုတင်ထားလို့ပေါ့
ဩော်. မေမေ့ကို သံအမတ်ကြီးခန့်လိုက်တယ်. မေမေအဲဒီ့မှာ သွားနေရမှာ. သမီးတို့လည်း
သံအမတ်ကြီးဆိုတာ ဘာလဲဟင် မေမေ.
ငါ့သမီးလေးက သိပ်အမေးအမြန်းထူတာပဲ. သံအမတ်ကြီးဆိုတာ တစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံ
အကြားမှာ အဆင်ပြေအောင် စကားတွေ ပြောပေးတဲ့ လူကြီးပေါ့. ခုဆို မေမေက
အဲဒီ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ ခုသမီးနေနေတဲ့ မြန်မာပြည်ကြီး အဆင်ပြေအောင် စကားတွေ
ဘာစကားတွေ ပြောရမှာလဲဟင် မေမေ.
သမီးလေးကြီးတော့ သိလာမှာပေါ့ကွယ်. ခုလောလောဆယ် သမီးချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို
လိုက်နှုတ်ဆက်လိုက်ဦးနော်. မနက်ဖြန်ညကျရင် မေမေ့သားသမီးလေးတွေနဲ့
သူငယ်ချင်းလေးတွေ နှုတ်ဆက်ပွဲလေးလုပ်ပေးမယ်နော်. သမီးလေးကြိုက်တဲ့ မုန့်တွေ
ငါ့မျက်နှာမှာ အပြုံးပန်းလေးတွေ ဝေဖြာလို့ ငါချစ်တဲ့ မေမေရဲ့ ရင်ခွင်ထဲကို
ငါ့လို အရွယ်လေးကို နားလည်အောင် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တယ်
မေမေ့ကို ခုချိန်ထိ သမီးသတိရနေတုန်းပါပဲ မေမေရယ်…
မေမေသွန်သင်ပေးခဲ့တဲ့၊ ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့ စည်းကမ်းတွေ၊ လူမှုကျင့်ဝတ်တွေကို
သမီးရဲ့ ဘ၀ခရီးတလျှောက်မှာ အောင်ပွဲတွေ အလီလီ ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လေ…
အောက်စဖို့ တက္ကသိုလ်ကို ငါဝင်ခွင့်ရတယ်.
ကျောင်းဝင်ခွင့်စာရွက်လေးကို ကိုင်လို့ မေမေ့ဆီကို ငါပြေးသွားခဲ့တယ်.
မေမေက ငါ့ကို ဆီးကြိုပွေ့ဖက်လို့ ငါ့ပါးပြင်ပေါ်မှာ အနမ်းလေးတွေ ခြွေခဲ့တယ်.
I'm proud of you, honey! လို့
ငါ့မျက်နှာကို ရွှမ်းရွှမ်းစားစား စိုက်ကြည့်ရင်း ပြောလိုက်တဲ့
မေမေက စကားတွေ အများကြီး မပြောခဲ့ပါဘူး.
ဒါပေမယ့် မေမေငါ့အတွက် သိပ်ကို ဂုဏ်ယူပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ ငါသိနေတယ်.
အဲဒီ့ညက ငါတို့အိမ်မှာ ပါတီလုပ်ခဲ့ ကြတယ်.
သီချင်းတွေကို တစ်ယောက်တစ်ပေါက် သီဆိုကြလို့
ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေ ထင်ကျန်နေဆဲပါပဲလေ…
အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်ကို တက်ဖို့ ငါထွက်ခဲ့ရပြီ
လေဆိပ်ကို မေမေနဲ့ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေက လိုက်ပို့တယ်.
Departure Gate ထဲမ၀င်မီ မေမေက ငါ့ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်နမ်းပြီး
I believe in you! တဲ့.
ငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့ ငါချစ်တဲ့ ငါ့မေမေအတွက်
၀င်ခွင့်သိပ်ခက်ခဲတဲ့ ဒီတက္ကသိုလ်ကို ငါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်
ဖတဆိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အများနဲ့မတူအောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့
ငါ့ဘ၀ရဲ့ အောင်မြင်မှု ပထမခြေလှမ်းသစ်အတွက်
တက္ကသိုလ်မှာ ငါအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်
ငါ့ရဲ့ Host Parents တွေက Lord Gore-Booth တို့မိသားစုပဲ.
သူက ငါတို့မြန်မာပြည်မှာ သံအမတ်ကြီးလာလုပ်သွားဖူးတယ်
သူ့အိမ်မှာပဲ ငါ့ရဲ့ အနာဂတ်ခင်ပွန်းလောင်း မိုက်ကယ့်ကို စတွေ့ပြီး
သူက တိဗက်လူမျိုးတွေအကြောင်းလေ့လာနေတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပဲလေ.
တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ထက်မြက်တဲ့
သူက ကုလသမဂ္ဂမှာ အလုပ်လုပ်နေတာလေ
အဲဒီ့အချိန်တုန်းက ဦးသန့်က အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်နေတယ်.
မသန်းအိက ငါ့ကို အလုပ်လျှောက်ဖို့တိုက်တွန်းတာနဲ့ လျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်
Administrative and Budgetary Questions မှာ Assistant Secretary အဖြစ်နဲ့ပေါ့.
ကျောင်းတက်နေတာကို ငါခဏနားပြီးတော့ အလုပ်ကို အချိန်ပြည့်လုပ်ခဲ့တယ်
မဟုတ်ရင် ဘယ်အရာကိုမှ အာရုံစိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ.
စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေမှာ ဆေးရုံတစ်ခုမှာ Volunteer
ဆင်းရဲတဲ့ လူနာတွေကို စာဖတ်ရာမှာ ကူညီနိုင်ဖို့နဲ့ အဖော်အဖြစ် နေပေးဖို့ပေါ့
ငါ့အချိန်တွေ ကျပ်တည်းခဲ့ပေမယ့် အဲဒီလူနာတွေအတွက် ရအောင်အချိန်ပေးခဲ့တယ်.
ငါ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေက ဘာလဲဆိုတာကို တစ်ချိန်တည်းမှာ ငါတွေ့ရှိခဲ့တယ်.
နယူးယောက်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ အချိန်က ၂ နှစ်ထဲရယ်ပါ.
ဒါပေမယ့် ငါအများကြီး ရင့်ကျက်ပြောင်းလဲခဲ့တယ်..
မိုက်က ဘူတန်ဘုရင်မိသားစုဝင်တွေကို စာသင်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာ
Research Officer အဖြစ်ဝင်လုပ်ခဲ့တယ်.
ငါချစ်တဲ့ ငါ့ခင်ပွန်းနဲ့အတူတူ ငါမြတ်နိုးတဲ့ အများအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကို
အဲဒီ အချိန်တွေကို ငါအမြဲတမ်းသတိရနေမှာပါ…
မိုက်ကိုတော့ ငါလက်မထပ်ခင်က prenuptial agreement တစ်ခုတောင်းခဲ့တယ်.
ငါ့ကို ငါ့တိုင်းပြည်က လိုအပ်လာရင် အချိန်မရွေး သွားရောက်ကူညီခွင့်ပြုပါလို့..
သူက ငါ့ကို နားလည်မှုရှိတဲ့အပြုံးနဲ့ ခေါင်းညိတ်ပြခဲ့တယ်လေ.
ငါ့ကို သိပ်နားလည်မှုရှိတဲ့သူကို ငါ့ဘ၀ရဲ့ ခင်ပွန်းလောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တာ
ငါ့ရဲ့ လွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ပဲ မဟုတ်ဘူးလား
I trust you… တဲ့
တကယ်တော့ ဒီနေ့အချိန်အထိ ငါ့စိတ်ဓာတ်တွေ မြဲမြဲခိုင်မာစွာနဲ့
ငါ့ရဲ့ အဖျက်အင်အားစုတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံနေနိုင်သေးတာ
ငါ့နှလုံးအိမ်ထဲကို လောင်းချခဲ့တဲ့ မေမေ့ရဲ့ သံမဏိစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်ပဲလေ…
ငါဘယ်တော့မှ ဦးကျိုးသွားမှာ မဟုတ်ဘူး…
ငါ့ဘ၀မှာ ဘာနဲ့မှမတူတဲ့ ခံစားမှုတစ်ရပ်ကို ငါခံစားလိုက်ရတယ်သိလား
အဲဒီနေ့က မေမေနဲ့ ငါစကားအကြာကြီးပြောဖြစ်တယ်.
ငါ့ကို စကားတွေ တတွတ်တွတ်နဲ့ မှာနေလိုက်တာ မပြီးတော့ဘူး
မေမေက ရယ်စရာတွေလည်း ပြောလိုက်သေးတယ်
ငါ့မှာ ရယ်လိုက်ရတာ ချောင်းတောင်သီးတယ်
ကင်မ်ကို မွေးတယ်. ငါ့ရဲ့ ဒုတိယသားလေးပေါ့
ခုဆိုငါလည်း ကလေးတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်မကြီးကို လုံးလုံးဖြစ်နေပြီလေ
ဒါပေမယ့် ငါ့ရဲ့ လေ့လာမှုကိုတော့ ငါမလျှော့သေးဘူး
ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ရင်းနဲ့ ငါစာတွေရေးဖြစ်ခဲ့တယ်
ဖေဖေ့ရဲ့ အတ္ထုပတ္တိနဲ့ Asian Studies စာတမ်းတစ်ချို့ပေါ့
မိုက်ကိုလည်း သူလေ့လာနေတဲ့ Himalayan Studies တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါကူညီခဲ့တယ်.
ကျိုတိုတက္ကသိုလ်မှာ Visiting Scholar အနေနဲ့ ဖေဖေ့ရဲ့ ဂျပန်ပြည်မှာ
ငါချစ်တဲ့ ငါ့ဖေဖေအတွက် ကျေးဇူးပြန်ဆပ်နိုင်တာ ဒီတစ်နည်းပဲ ရှိတော့လို့ပါ.
ကလေးတွေကို ခေါ်ပြီး ရန်ကုန်ကိုအလည်သွားခဲ့တယ်.
ရန်ကုန်ကိုရောက်တုန်း ကလေးနှစ်ယောက်လုံးကို သာသနာ့ဘောင်တက်စေခဲ့တယ်
ရေစက်ချနေတဲ့ ငါ့လက်တွေ တုန်နေခဲ့တယ်.
မေမေ့မျက်နှာမှာ အပြုံးတွေ လင်းလက်နေခဲ့တယ်.
ငါ ရဟန်းဒါယိကာမ ဖြစ်ခဲ့ပြီလေ..
ကလေးတွေနဲ့အတူတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဆင်းမလားပြည်နယ်ကို သွားခဲ့တယ်
မိုက်က စာတမ်းတွေ ပြုစုနေခဲ့တယ်.
မေမေ့ကို ဆေးရုံတင်ထားတာကို သွားပြီး စောင့်ရှောက်ဖို့ပေါ့.
စက်တင်ဘာလထဲမှာ ငါတို့မိသားစုတွေအားလုံး အောက်စဖို့ကို ပြန်လာခဲ့ကြတယ်.
ငါ့ရဲ့ Advanced Degree အတွက်
London School of Oriental and African Studies မှာ
၁၉၈၈ ခုနှစ် မတ် ၃၁
ဒါပေမယ့် ကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းကတော့ ခါတိုင်းလို မဟုတ်ခဲ့ဘူး
နောက်တစ်နေ့မှာပဲ လေယာဉ်နဲ့ ရန်ကုန်ကို ငါထွက်ခွာခဲ့တယ်
ရောက်ရောက်ချင်းပဲ မေမေရှိနေတဲ့ ဆေးရုံကို အပြေးသွားခဲ့တယ်.
မေမေခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာကို ငါလဲယူလို့ရနိုင်မယ်ဆိုရင် ယူပစ်ချင်လိုက်တာ..
ကုတင်ပေါ်မှာ လဲလျောင်းနေတဲ့ မေမေ
ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ နိုင်ငံရေးတွေ စတင်ရှုပ်ထွေးနေတယ်.
အမြင်မတော်စရာတွေ၊ စိတ်တိုင်းမကျစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်
၈ ရက် ၈ လ ၁၉၈၈ မှာ တစ်နိုင်ငံလုံး အရေးတော်ပုံ ဆင်နွှဲခဲ့ကြတယ်.
ရာဇ၀င်တွေလည်း ရိုင်းခဲ့ရပြီ အဖသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရယ်…
စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်
ဒီအချိန်မှာ ဒါတွေကို ငါမသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး အင်္ဂလန်ကို ပြန်သွားမလား
ဒါဆိုရင်တော့ ငါ့မိသားစုနဲ့အတူတူ အသိုက်အမြုံမပျက်
ငါ့ကိုယ်ထဲမှာ အာဇာနည်သွေးတွေ စီးဆင်းနေတယ်.
ငါ့တိုင်းပြည် ငါ့လူမျိုးအတွက် ငါ့ရဲ့ပေးဆပ်မှု အခန်းကဏ္ဍ စတင်ခဲ့ပြီ
သူတို့ ငါ့ကိုလိုအပ်နေပြီလို့ ငါခံစားရတယ်.
ငိုကြွေးနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ငါမျက်ကွယ်မပြုနိုင်ဘူး
ငါချစ်တဲ့ ငါ့ ပြည်သူတွေအတွက်၊ ငါချစ်တဲ့ ငါ့နိုင်ငံတော်အတွက်၊ ငါချစ်တဲ့
ငါမြန်မာပြည်မှာ နေပြီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်ဖယ်ရှားမယ်.
လူတိုင်းကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်လွတ်လပ်စွာဖန်တီးယူနိုင်အောင် ငါကြိုးစားမယ်
NLD ကို စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့မှာ စတည်ထောင်တယ်.
ဂန္ဒီရဲ့ အဟိံသလမ်းစဉ်ကို ငါစွဲမြဲစွာ ယုံကြည်ခဲ့တယ်လေ
စစ်ဘီလူးရဲ့ မျက်နှာဖုံးကို အကြမ်းမဖက် အနုနည်းနဲ့ ခွာချပြနိုင်ခဲ့တယ်.
တည်ငြိမ်စွာနဲ့ သူတို့ဆီကို ဦးတည်ပြီးလှမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်
င့ါရင်ထဲက ခိုင်ကျည်တဲ့ သစ္စာတရားနဲ့ ဖြောင့်မှန်တဲ့ မေတ္တာဓာတ်ကို
သူတို့ကြားထဲက ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ ငါ့ကို
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်
မေမေ့အသက် ၇၆ နှစ်ထိ အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ မေမေ့အတွက်
ကောင်းကင်ဘုံက လက်ကမ်းကြိုဆိုနေမယ်လို့ သမီးခိုင်မာစွာယုံကြည်နေပါတယ်.
၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂ ရက်
မေမေ့ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပို့ကြတဲ့ ပြည်သူတွေ မနည်းဘူးမေမေရယ်.
မေမေ့ကို သဂြိုဟ်တဲ့နေ့မှာပဲ မေမေ့ရုပ်ကလာပ်ရှေ့မှာ သမီးတိုင်တည်သစ္စာပြုခဲ့တယ်
ဖေဖေနဲ့မေမေတို့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအတွက် သေသည်အထိ ကောင်းကျိုးသယ်ပိုး
ဒီတာဝန်ကို ကျေပြွန်အောင် သမီးဆက်လက်ထမ်းဆောင်ပါ့မယ်
ငါ့ကိုလိုက်နှောင့်ယှက်နေတဲ့ အတားအဆီးတွေကြားထဲကပဲ ငါတို့ NLD ပါတီ
ရွေးကောက်ပွဲကို ခြွင်းချက်မရှိ အနိုင်ရခဲ့တယ်.
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကို အကျုံးမ၀င်ပါဘူးလို့ ဗြောင်ငြင်းတယ်.
အဲဒီကတည်းကပဲ ငါ့ကိုပြန်လွှတ်လိုက်၊ အကျယ်ချုပ်ပြန်ချလိုက်နဲ့
သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုတွေနဲ့ ငါ့နာမည်ကို ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတာ
ငါလုပ်စရာရှိတာတွေကိုပဲ အေးအေးဆေးဆေး မမှားရအောင် ငါလုပ်ခဲ့တယ်
ငါ့သားကြီး အဲလက်စ်က အခမ်းအနားမှာ ငါ့ကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်စကားပြောသတဲ့လေ..
မေမေ့အတွက်ရတဲ့ ဆုကြေးငွေကို Prospect Burma ဆိုတဲ့ NGO အဖွဲ့ဖွဲ့ပြီး
မြန်မာပြည်က ပညာတော်သင်ကျောင်းသားတွေကို ပံ့ပိုးကူညီနေတာ
မေမေက ကိုယ်ကျိုးရှာသူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သားတို့အသိဆုံးပါ
သားတို့ကို ပစ်ထားချင်လို့ ပစ်ထားတာမဟုတ်ရပါဘူး
သားတို့ကိုချစ်တဲ့အချစ်တွေထက် နိမ့်ကျနွမ်းပါးနေတဲ့ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူလူထုကို
သားတို့အပေါ် ဂရုမစိုက်မိခဲ့တာတွေကို နောင်ဘ၀ဆိုတာတွေမှာ ပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ရင်
အတိုးချပြီး ပြန်ပေးဆပ်ပါမယ် သားတို့ရယ်…
၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်
ဆိုတဲ့ စစ်ဘီလူးရဲ့ ကြိုးဆွဲရုပ်တွေအောက်မှာ
တိုင်းပြည်ရဲ့ အညွှန့်အဖူးလေးတွေ လွင့်ကြွေခဲ့ရရှာပြီ…
အဲဒီညက ကောင်းကင်ပြာကြီးမှာတောင် သွေးရောင်တွေလွှမ်းနေခဲ့တယ်.
ရင်ထဲမှာ ဆို့နစ်လိုက်တာ ချစ်သားချစ်သမီးတို့ရယ်..
ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကို ဘယ်ဘ၀မှာမှ ထပ်မံ မကြုံတွေ့နိုင်ကြပါစေနဲ့တော့လို့
ငါ့ကို ပြန်လွှတ်ရင်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ စောင့်မျှော်နေသူတွေလည်း
မျက်စိကိုမှိတ်၊ နားကိုပိတ်ပြီး တရားစီရင်ချင်သူတွေရဲ့ အတ္တများအောက်မှာ
အမှန်တရားက ကမ္ဘာကိုပတ်ဖို့ သူ့ဖိနပ်လေး လိုက်ရှာနေတုန်းပဲ
နွေမိုးဆောင်းပေါင်းများစွာလည်း ငါ့ခြံဝင်းထဲမှာ ကျရောက်ခဲ့ပြီ
ငါ့ပါးပြင်ပေါ်မှာလည်း အရေးအကြောင်းတစ်ချို့ နေရာယူခဲ့ပြီ
ငါ့အသက်လည်း ၆၂ နှစ်ထဲရောက်ခဲ့ပြီ
ငါ့သားတွေလည်း အိမ်ထောင်ရက်သားကျသူကျနဲ့ အခြေကျကုန်ပြီ
ကုတင်တိုင်ကို လက်နဲ့ကိုင်ပြီး အားယူလို့ ငါထလိုက်တယ်
ရေဒီယိုထဲက ဆုတောင်းသံတွေ တစ်သဲသဲနဲ့ ၀င်လာမစဲဖြစ်နေတယ်.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်… ကျန်းမာပါစေ.. ချမ်းသာပါစေ..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်… ကျန်းမာပါစေ.. ချမ်းသာပါစေ.. တဲ့..
ကျလုဆဲဆဲ မျက်ရည်တစ်ချို့ကို သိမ်းဆည်းလိုက်ပြီး
ငါ့ကိုစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ ရဲဘော်လေးတစ်ယောက်က ငါ့ကို အလန့်တကြားမော့ကြည့်တယ်.
ငါ့ရဲ့ အေးမြတဲ့ အပြုံးအောက်မှာ ခက်ထန်တဲ့ သေနတ်ပြောင်းဝလေး တိုးလျှိုးလို့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ထွက်ပြေးမယ့် မိန်းမစားမဟုတ်ပါဘူး
တိုင်းပြည်အတွက်၊ လူမျိုးအတွက်၊ အရိုးကြေကြေ၊ အရေခမ်းခမ်း အများအကျိုးအတွက်
အသက်နဲ့ ဘ၀ကိုပါ ပေးလှူထားတဲ့ အာဇာနည်မိန်းမပါ.
မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး အမှောင်ကိုဖျောက်လို့ အလင်းနေ့သစ်များကို
ကွယ်လွန်သူ ဖေဖေဦးအောင်ဆန်းနှင့် မေမေဒေါ်ခင်ကြည်..
ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်အမျိုးကောင်းသား ရဟန်းရှင်လူများ…
မှတ်ချက်။ ။ ဤကဗျာသည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ရေးဖွဲ့ထားသည့်ကဗျာမဟုတ်ပါ။တစုံတဦးမှ ခံစား
Posted by victorOway at 11:00 AM No comments:
Labels: Diary -ကဗျာ/ပန်းချီ-ဒေါင်းနီ
တော်လှန်ရေးနှင့် လူထုဆက်ဆံရေးအတွေ့ အကြုံ၊
လက်ရှိရပ်တည်လှုပ်ရှားနေရသည့်ဒေသသည် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတရပ်အနေနှင့် မရှိမဖြစ်အောင် ရှိသင့်သည့် တော်လှန်ရေး အခြေခံ ဒေသကြီး တစ်ခုဖြစ်သည်၊ လက်တွေ့ ရပ်တည် လှုပ်ရှားရင်း ဤကဲ့ သို့ တန်ဘိုးထား နားလည် နေမိသည်၊ လူထုဆိုရာဝယ် ယခင်က သိ၇ှိထားသည့် လူထုဆိုသည်မှာ တမျိုးတစားတည်းပဲ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု တွေးထင်ထားခဲ့ မှုများ အလွဲလွဲ အမှားမှား ဖြစ်ခဲ့ရသည်၊ ဆင်းရဲသား။ လူမျိုးရေး။ အဆင့်အတန်း ကွာခြားမှု။ ဘဝပေး အခြေအနေတွေ။ အသိပညာ ခေါင်းပါးဝေလံမှု ပြဿနာကြီးများ တနေ့ တခြား ပိုမိုဆိုးရွာ လာတာတွေ့ ရသည်၊ တဘက်မှာလည်း ချစ်ခင်စရာ ကောင်းသည့် ရိုးသားမှု ပျူငှာမှုတွေကို လည်းတွေ့ ရသည်၊ တချို့ ကြတော့ အတွေး အခေါ်အရ သံသယတွေနှင့် တော်လှန်ရေး ရဲဘော်တွေကို နိုင်ငံရေး အသိရေချိန် ဘယ်အဆင့် အထိရှိပြီလဲ-ဆိုတဲ့ စမ်းသပ်မှု တွေလည်း တော်လှန်ရေး ရဲဘော်များထ ရိုက်ခတ် လာမှုတွေ ကလည်း ဒုနဲ့ ဒေး၊ ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘာလဲ၊ ဒီမိုရေစီကိုဘယ်လိုအဓိပြါယ်ဖွင့်ဆိုမလဲ၊ မောင်ရင်က တော်လှန်ရေးသမား ဆိုရလောက်အောင် မောင်ရင့်မှာ တော်လှန်ရေး သမားနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့အရည်အချင်းတွေ လုံလုံ လောက်လောက်ရှိပြီလား-စသည့်မေးခွန်းတွေက ကျနော်တို့ . ပတ္တမြား အရည်အသွေး တွေကို ပြောင်မြောက် အောင်သွေးပေး နေသည်ဟု ခံစားနားလည်ပြီး ရှေ့ ဆက် တော်လှန်ရေး ခရီးတွေထဲ့ အတွေးအခေါ်အရ ရှင်ပြန် ထမြောက် နေနိုင်ဘို့ကြိုးစားရင်း လူထု၏ ယုံကြည် ကိုးစားမှုကို ဦးထိတ်ထားပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် တည်ဆောက်ရေး ဆိုသည့် လုပ်ဟန်ကို အခြေခံ ဒေသကြီးမှာ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။
လူထုဆိုသည်မှာ သူရဲကောင်းဝါဒကို လက်ခံလက်ခံယုံကြည်နေကြဆဲရှိသည်ဟုတွေ့ မြင်ခဲ့ရသည်။ သမိုင်းကြောင်း တွေအရ နောက်လှန်ကြည့် မည်ဆို လျှင် ကမ္ဘာ့ရာဇဝင်၊ သမိုင်းတွေမှာ လွတ်လပ်ရေး သူရဲကောင်းများ ထွန်းကားခဲ့ကြသည်၊ ကျောင်းပညာရေး သမိုင်း သင်ခန်းစားများ၏ လွတ်လပ်ရေး သူရဲကောင်း များကို ကျနော်တို့ အားကျနှစ်သက်ခဲ့သည်မှာ ငြင်းဖွယ်မရှိပေ။ ဒီနေ့ဒီဒေသမှာလည်း လူထုအများစုဟာ သူရဲကောင်း ဝါဒကို လက်ခံယုံ ကြည်နေကြသည်ဆိုတာ ငြင်းဖွယ်ရာ မဟုတ်ဟု တွက်ချက် နေမိသည်။တခါက အခြေခံဒေသ ထိုးဖောက်ရေးရွာထဲမှ စကားစမြည်ပြောဖြစ်ခဲ့ကြသည်ကို မြင်ယောင်နေမိသည်၊ ထိုလူငယ်မှာ ခေတ်ပညာတတ်လူငယ် တစ်ယောက်ဖြစ် သည်၊ စားနိုင် သောက်နိုင် မိသားစုမှဖြစ်မည်၊ ထိုလူငယ်က ကျနော်တို့ နှင့်သွားရင်းလာရင်းသိကျွမ်း ခင်မင်သည်မှာ ကြာပြီ ဖြစ် သည်။ရေနွေးဝိုင်း၌စကားလက်စုံပြုရင်းထိုလူငယ်ပါးစပ်မှထွက်ပေါ်လာသောစကားတချပ် အပေါ်မှာ သတိတွေရရင်း -နိုင်ငံရေးကို မသိဘူး။ နိုင်ငံရေးလည်း စိတ်မဝင်းစားဘူး။နိုင်ငံရေး အကြောင်းလည်း မသိချင်ဘူး-တဲ့။ ခင်ဗျား၊ အဲဒါသာကြည့်ပါတော့ထိုစကားလုံးသည်ယနေ့လူငယ်အချို့ လူလတ်အချို့လူကြီး အချို့ အတွင်းမှာ ရေပန်းစားနေသော စကားဖြစ်သည်။ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်တပ်ကြီးစိုး သည့် အချိန်ကာလ နောက်ပိုင်း ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၏တဖွဲ့ နှင့်တဖွဲ့ ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ကြသည့် အမွေများကိုသင်ကြားသိခဲ့ရှု ထိုအသိ၏နောက်၌အစွဲအလန်းအတေးအမှတ်ထားကြ၍ နိုင်ငံရေးကို စိတ်မဝင်စားဘူးဟုပြောနေသည်မှာမှားမည်မဟုတ်။တဘက်မှာ-သမိုင်းကိုစိတ်ကုန်၍ အလွယ်နည်း နှင့်အခက်ကြီးလုပ်ပြီး နိုင်ငံရေးကိုစိတ်မဝင်စားဘူးပြောတာဖြစ်မည်။ဤသို့ဆိုလျှင် အခြားတ ဘက်က တွေးကြည့် မည်ဆိုလျှင်ထိုသူတို့၏ မူရင်းစိတ်ထဲ၌အမှန်မြင်ထားသည်မှာနိုင်ငံရေးဆိုသည်မှာ အဖိုးထိုက်တန်လှသည့် ရိုးသားသည့် သစ္စာ တရားဟု မှတ်ယူဟန် ရှိသည်ကို သူတို့ ၏မသိစိတ်ထဲမှ စံပြုနေသည်ကို တော့ဖြင့်။
လူထုအများကြီးရှိကြသည်အထဲ အုပ်ချုပ်ရေး ဆိုင်ရာများတွင် အထူးသဖြင့် လူထုသည် ရန်သူ့ ဘက်ကို ယိမ်းယိုင်သည့်အချို့ ရှိကြသလို။တော်လှန်ရေးလက်တွေ့ ကျကျ ရုပ်ပိုင်း။ စိတ်ပိုင်းပါဝင်ကြသည့်လူထု များလည်းရှိသည်၊ အများအားဖြင့် တော်လှန်ရေး လက်တွေ့ ဘဝထဲသို့ တစုံလုံးပါဝင်လာကြသည့် လူထုမှာ ဆင်းရဲသား။တောင်သူလယ်သမားတွေကအများစုဖြစ်သည်။လက်ရှိဒေသ၌စစ်တပ်မှလူထု တွေ၏ဥယျာဉ်။ခြံ။ မြေ။တောင်ယာ။လယ်ယာများကိုမတရားအခွန် ကောက်ခံ၍ ပင်ပန်းမှု၏ အကျိုး ကျေးဇူးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်မခံစားရပဲယခုလိုခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးအနိုင်ကျင့်ကောက်ခံနေရမှုများအပေါ် မခံမရပ်နိုင်ပဲရုပ်ပိုင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအစတောင်သူလယ်သမား။ဆင်းရဲသာလူထုများက စစ်တပ်ကို ရသလို နည်းဖြင့်တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတာတွေ့ ရ၍ အားတက်မဆုံးဖြစ် ခဲ့ရသည်။
﻿ ရွာတစ်ရွာ့ ရန်သူ့ စစ်ကြောင်း ဝင်လာရာ ယခင်လို ရွာတိုင်း လိုလိုက လဘက်သုတ်။ ရေနွေး။ အခြား ကောင်းနိုး ရာရာ ဒေသထွက် သီးနှံများဖြင့် တည်ခင်း ဧည့်ခံလေ့ ရှိကြသည်၊ တော်လှန်ရေး လက်နက်ကိုင် အင်အားစုတွေ ထိုဒေသကို ရောက်ရှိချိန် နောက်ပိုင်း-ရန်သူ့ စစ်တပ်ကို ရေနွေးတောင် ချမတိုက်ပဲ ဗြောင်အနု နည်းဖြင့် စစ်တပ်ကို ဆန့် ကျင် တော်လှန် တိုက်ပွဲဝင် နေကြသည်ကို ထိုဒေသ၌ တွေ့ မြင်ခဲ့ရသည်။
ရန်သူ့ ဘက်တွင်လည်း-ဆက်ဆံရေး မပျက်ရလေအောင်။ တော်လှန်ရေး အင်အားစု ဘက်တွင်လည်း ဆက်ဆံရေး မပျက်ရ လေအောင် နှစ်ဘက် ပေါ်လစီပုံစံဖြင့် ဆက်ဆံကြ သည့်အချို့ သော လူနည်းစုကိုလည်း ထိုဒေသ၌တွေ့ ခဲ့ရသည်။
၄င်းတို့ ကတခါတရံ တော်လှန်ရေး အင်အားစုများ ကို ခြိမ်း ခြောက်အကြပ် ကိုင်သည့်နည်းတွေဖြင့် ပြုမှုလုပ်ဆောင် တတ်ကြသည်၊ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများမှ ထိုကဲ့ သို့ သော လူများကို နိုင်ငံရေးအသိ။ စစ်ရေး သတိအထူးရှိစွာ စောင့်ကြပ်ရင်း လူထုနောက်မြီးဆွဲ ဖြစ်မသွားရလေအောင် တည်ဆောက်မှု ပြုရသည်၊
-ရန်သူစစ်တပ်တွေ ရွာထဲ ရောက်နေပြီ ဗိုလ်ကြီး- စစ်ကြောင်းမှုးကကျနော်တို့ ကိုပြောတယ်ရွာအနီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတြဲ့နေရာတွေ ကို မြေလှန်ရှာမယ်တဲ့- အဲဒါဗိုလ်ကြီးတို့ဒီနေရာကဆုတ်ပေးဘို့ လာပြောတာပါ၊
ထိုကဲ့သို့စကားအမြဲ ပြောလေ့ရှိသူများကို ကျနော်တို့ မှအလိမ်မာနည်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း။တခါတရံနဂါးမှန်း သိအောင် အမှောက်ထောင်ပြ ရသည်များကို ပြုလုပ်ပေး ရသည်၊ ထိုအခါ ထိုလူထုမှာ နောင်ဆိုရင် ထိူစကားမျိုးနှင့် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်း ကို ခြိမ်းခြောက်၍ မရ ကြောင်း သိလာခဲ့ ကြသည်။
တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများတွင်လည်း အားနည်းချက် ရှိကြသည့် ခေါင်းဆောင် များလည်း ရှိပါသည်၊ ထိုခေါင်းဆောင် များသည် ကျော်ကြားမှု ဂုဏ်ကို အထူးနှစ်သက် မြတ်နိုးကြသည်၊ ခေါင်းဆောင်များ၏နှစ်သက်မြတ်နိုးမှုကို လေးစားသော်လည်း တခါတရံ မိမိ ကျော်ကြား အောင်မြင်ရေးအတွက် တလွဲအယူအဆ များဖြင့် မိမိ ယူထားသည့် တာဝန်ကို အလွဲသုံးစား ပြုတတ်ကြသည်။
ထိုအခါထိုခေါင်းဆောင် များသည် ဝေဖန် ထောက်ရှုမှုကို လက်မခံပဲ နိုင်ငံရေး အမှားကို ကျူးလွန်ပြီး စစ်ဘုရင်ဝါဒ။ တကိုယ်တော် တည်ဆောက်ရေး ဝါဒကို အသုံးပြု တတ်ကြသည်။
ထိုသူတို့ ၏ ဦးနှောက်ထဲတွင် တော်လှန်ရေးဘဝနှင့် အခြေအနေကို မရိပ်စားပဲ မိမိတပ်ကို ပြောက်ကျားဗျူဟာ အရမစဉ်းစားပဲ လက်လှမ်း မမှီသည့် နိုင်ငံတကာ တပ်ကြီးလို တည်ဆောက်ချင် တတ်ကြသည်၊ တခါတရံတွင် ဗျူရိုကရက်ဆန်စွာ တည်ဆောက် ကြပြီး လက်တွေ့လုပ်ငန်းအရ အကျိုးမပေး သည့် လုပ်ဟန်များကို အချိန်ကုန် လူပန်း တည်ဆောက်ကြ သည်။
တော်လှန်ရေး၏ အခြေခံဒေသ ထိုးဖောက်မှု ဧရိယာသည် အမှန်တကယ်ရန်သူမှ မြေပုံဂရပ်ကွက် အပြည့်ဗျူဟာ ချပြီး စစ်ဆင်ရေးလုပ်လျင် မိမိတို့ အခြေအနေနှင့် ဆက်လက် ရပ်တည်၍ ရမည်မဟုတ်ချေ။ ယခင့်ယခင်က ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ် ပါတီများ ဤဒေသတွင် ကာလ ပေါင်းများစွာ ထိုးဖောက်ရေး လုပ်စဉ်က စစ်တပ်မှ ဖြတ်လေးဖြတ် ပုံစံဖြင့် အနောက်ပဲခူးရိုးမနှင့် လက်ရှိဒေသ တွေကိ်ု မဟာဗျူဟာမြောက် စစ်ဆင်ရေး ပြုလုပ်ခဲ့ ကြသည်။
ထို့ ကြောင့်ဤ ဒေသတွင် လူထုကို တော်လှန်ရေး အတွေးအခေါ် တရပ် တည်ဆောက်မှု။ စစ်ရေးအရရန်သူ့ တပ်တွေကို ပြောက်ကျား တိုက်ပွဲများဖြင့် အကောင် အထည် ဖော်မှု။ လူထု လက်တွေ့ ဘဝ။ လူ့ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ။ လူထု အကျိုး စီးပွားကိုရှေ့ ရှူ့ပြီး ကာကွယ် စောက်ရှောက် မှုများဖြင့် အလုပ် အကျွေးပြုခြင်း အားဖြင့် လူထုနှင့် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများ တဘဝတည်း သဘာဝကျစွာ တည် ဆောက်ခြင်းကို တပြိုင်နက် တည်ဆောက်ခြင်း ကြောင့် လူထု၏ ယုံကြည် လေးစားမှုကို ထိုအခြေခံ ဒေသကြီးတွင် တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့ကြသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများတွင် ကျနော်တို့ နှင့် မဟာမိတ်အဖွဲ့ အစည်းများ ညှိနှိုင်းပြု လုပ်ခဲ့ကြသည်။နှစ်ဖွဲ့ ၏ အုပ်ချုပ်ရေး ဒေသသည် လက်ရှိအခြေခံ ဒေသကြီး ဖြစ်ပြီး ထိုအုပ်ချုပ်ရေးကို ပူးတွဲ အုပ်ချုပ်ရေး ဒေသဟု သတ်မှတ် ခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့ .အထူးဒေသကို နိုင်ငံရေးအရ အုပ်ချုပ်ရာ မှာတော့ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြီး စစ်ရေးအရ မဟာမိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုနှစ်ဖွဲ့၏မူလသဘောတူညီချက်များအတိုင်းဆက်လက်ထား ရှိခဲ့ကြသည်။
ထို့ကြောင့် စစ်တောင်းမြစ်ဒေသဘက်မှ အရှေ့ တောင်သို့ကူးသန်း သွားလာကြသည့်အောက်ကွင်းမှဗမာများကို ကျနော်တို့အဖွဲ့ မှ အုပ်ချုပ်ရေးအရကိုင်တွယ်၍ လုပ်ငန်းကိုယ်စီဖြင့် ဤဒေသ၏အားသွန် ခွန်စိုက်တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခဲ့ ကြရသည်။
အလုပ်အဖွဲ့ ၏ အခြေခံဒေသ ထိုးဖောက်ရေး ကာလမှာ တစတစ ကြာမြင့်လာခဲ့ ချေပြီ။လူထုသည်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းနှင့်စည်းမျဉ်းကမ်း တွေအပေါ်၌နေသား ကျစွာအခြေကျနေချိန်ဖြစ်၍ရဲဘော်တွေ၏လူထုအတွေ့ အကြုံမှာနည်းလှသည်မ ဟုတ်တော့၊။သို့သော်ထိုကဲ့သို့အချိန်ကောင်းနေချိန်အတွင်းဌာနချုပ်နှင့်ကျနော်တို့ မှာ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအရလွန်စွာအခက်အခဲရှိနေပေသည်။ လက်ရှိဒေသ၏အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်ရန်သူနှင့်အပစ်ရပ်ထားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ကယန်း ပြည်သစ်ပါတီအဖွဲ့အစည်းရှိသည်။ကယန်းပြည်သစ်နယ်မြေ၏အရှေ့ တောင်ထောင့်တွင်(ကလလတ) ကယန်းလူမျိုးလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းရှိသည်။ ထိုအဖွဲ့ အစည်းမှာလည်း ၁၉၉၄ခုနှစ် ကာလလောက်ကတည်းကရန်သူနဝတနှင့်အပစ်ရပ်ထားသည့်အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။တရားဝင်အရ ကျနော်တို့အဖွဲ့ အစည်းများနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်၍မရပါ။ ရန်သူ့ ထောက်လှမ်းရေးမှထိုအဖွဲ့ အစည်း တာဝန်ရှိ သူများကိုမကြာခဏခေါ်ယူမေးမြန်း မှုများ ပြုလုပ်သည်ဟုကြားသိရ၍အဆက်အသွယ်မပြုလုပ်လိုကြ။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအချင်းချင်းနားလည်မှုလွဲမှားစေအောင်ရန်သူမှတစိုက်မတ်မတ် ပြုလုပ်နေတာတွေကိုတွေ့ ရသည်။အထူးသဖြင့်ရပ်တည်နေရသည့်ဒေသသည်ကေအန်ယူလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း၏အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်သည်။ရန်သူမှအပစ်ရပ်စဲထားသည့်ကယန်းပြည်သစ်ပါတီနှင့်ပဠိ ပက္ခဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေသည်။ထိုနှစ်ဖွဲ့ စလုံးတဖွဲ့ နှင့်တဖွဲ့ အမြင်မကြည်လင်မှုများဖြစ်ကြရသည်။ထိုအခါ ကျနော်တို့မကဒတအဖွဲ့ အစည်းအနေနှင့်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေ၏ညီညွတ်ရေးအပေါ်မှာအခြေ ခံပြီးမဖြစ်သင့်တာမဖြစ်ရလေအောင်ကြားဝင်စေ့စပ်ပေးမှုများကိုအထက်ညွှန်ကြားချက်အရတာဝန်ယူ ပေးခဲ့ကြရသည်။
ထိုသို့ သော အခြေအနေများဖြစ်နေချိ်န် အတောအတွင်း အထူးဒေသထိုးဖောက်ရေး၊စည်းရုံးရေးကိစ္စများ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အောက်ကွင်းမှအင်းကြီးပေါက်ရွာသို့ရွေးချယ်လိုက်ကြသည်။ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း ယခင်လိုပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ပဲအလုပ်အဖွဲ့ (၂)ဖွဲ့ စုပေါင်းပြီး ဆင်းရန်ဖြစ်သည်။ရဲဘော်ဒိုးဒိုးမှအလုပ်အဖွဲ့(၁)ဖြစ်ပြီးရဲဘော်အောင်ကျော်-ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ မှာအလုပ်အဖွဲ့ (၂)အဖြစ်ခွဲ၍ ထိုးဖောက်ရေးရွာသို့ညအချိန်ကြီးဆင်းကြရသည်။ ရဲဘော်ဒိုးဒိုး-ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ သည်ရေကန်ဒိုရွာစပ်မှစထွက်သည်။ ကျန်အဖွဲ့ မှာပိတောက်ကုန်းရွာနားမှဖြတ်ပြီးမြောက်မျဉ်းကြောင်းအတိုင်းဆင်းလာမည်။သစ်ဆွဲထားသည့် ကားလမ်းအတိုင်းသတင်းထောက်၍ဆင်းကြရသည်။လမ်းတွင်အောက်ကွင်းမှရွာသားအချို့ တောင်ပေါ်သို့ညဘက်ရောက်မှတက်ရောက်ဈေးရောင်းကြသည်။နေ့ဘက်တွင်မတက်ရခြင်းမှာရန်သူ့စစ်တပ်မှတောစပ် တွင်ကြိုစောင့်၍ဈေးတက်ရောင်းသူရွာသားများထံမှဓါးပြတိုက်သောကြောင့်ဟုသိရသည်။ကျနော်တို့အဖွဲ့အင်းကြီးပေါက်ရွာသို့ည(၇)နာရီကျော်ခန့်တွင်ရောက်သည်။ရွာအဝင်ဝ၌အင်းကြီးပေါက်ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိသည်။ကျောင်းရှေ့တည့်တည့်တွင်လူနှစ်ဘက်သာသာခန့် ရှိသောထန်းပင်ကြီးတစ်ပင်။ စက်ငယ်ဖွင့်၍ ပိတောက်ကုန်းဘက်မှထွက်လာမည့်ရဲဘော်အောင်ကျော်တို့အဖွဲ့ကိုကျနော်တို့စောင့်နေ၏၊
မကြာခင်နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းမိသွားသည်။တပ်ခွဲတစ်ခွဲခန့် ရှိမည်။အင်းကြီးပေါက်ရွာမှာအိမ်ခြေ(၁ဝဝ)ကျော်ခန့် ရှိ မည်။ရွာသားများ၊လူထုများ၊တစ်ဘက်မှလည်းရန်သူနှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်လိမ့်မည်စိုးရိမ်စိတ်နှင့်ကြောက်နေကြ သည်ကတစ်ကြောင်း။တဘက်မှလည်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ချင်၊တွေ့ ချင် ၍တကြောင်းနှင့်။လူထုကြီးမှာကလေးငယ်မှအစကျောင်းသားအလယ်၊ကာလသား၊ကာလသမီးအဆုံးတွေ့ဆုံကြသည်။ယခင်လိုတိုက်ပွဲမဖြစ်စေရန်အတွက်အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးအင်းကြီးပေါက်ရွာမှကျနော်တို့အဖွဲ့အမြန်ဆုံးထွက်ရန်ပြင်ဆင်ကြသည်။
ဖြစ်ချင်တော့-- -အင်းကြီးပေါက်ရွာမှ စစ်ကြောင်း စစ်ရေးသတိအထူးရှိစွာနှင့်ဖြတ်ရန်ရဲဘော်ဒိုးဒိုမှ ပွိုင့်ထွက်ရဲဘော် ရှန်သိုကြီးအားမှာကြားနေသည်။
မကြာမီ စစ်ကြောင်းစထွက်ပြီ၊ အင်းကြီးပေါက်ရွာအထွက် --ဘုန်းကြီးကျောင်း ထန်းပင်ကြီးအနားအရောက်-- အမှောင်ထဲမှ စူးရှပြတ်တောက်သည့် အသံထွက်ပေါ် လာသည်၊
----ဟေ့--ရပ်----ဘယ်သူလဲ ထိုအခါ ပွိုင့်ထွက် ရဲဘော်မှ ကိုယ်လူ မဟုတ်မှန်းသှို လမ်းမကြီးပေါ်၌ အသာအယာ ထိုင်ချလိုက်သည်၊ အေကေ မောင်းပြန်သေနတ်ကို လုံခြုံရေးခလုတ် အသာလေး ဖွင့်လိုက်သည်၊
ရှေ့ တွင် ရန်သူ့ စစ်ကြောင်း အမြီးနှင့် ကျနော်တို့ စစ်ကြောင်းခေါင်းတည်မိနေပြီ၊ ရဲဘော် ရှန်သိုသည် အေကေ သေနတ်၏ နဂိုချိန်ရွယ်ချက်ကို ပြင်လိုက်သည်၊ သေနတ်ကို အပြားလိုက် အနေအထား ထားလိုက်ပြီး ရန်သူ့ စစ်ကြောင်းကို အမှောင်ထဲမှ ဝှေ့ ဝိုက်၍ တရပ်စပ် ကုတ်ချလိုက်သည်၊
ထိုအခါ သေနတ်သံများ လယ်ကွင်း ထဲတွင် ဝက်ဝက်ကွဲ ဆူညံ ကုန်သည်၊ တိုက်ပွဲက ညတိုက်ပွဲ၊ ရဲဘော် ရှန်သို၏ နောက်မှ ကုလားကြီးမှာ ခွန်ကိုး-မမ ကို မတ်တပ်ရပ်ပြီး ရန်သူ့ စစ်ကြောင်းရပ်နေ သည့်နေရာ။
သစ်ပင်ကြီးရှိရာသို့တည့်တည့် ပစ်ထုတ်လိုက်သည်၊ လက်နက်ကြီး ကျကွဲသံများ ဝက်ဝက်ညံ ကုန်သည်၊ ယခုတိုက်ပွဲ ဖြစ်နေသည့် ရန်သူ့ စစ်ကြောင်းမှာ ရေတာရှည်လေး ဘက်မှ တိုက်ကင်း ထွက်လာသော ရန်သူခလရ (၂၃၄) တပ်ဖြစ်သည်၊ ရန်သူများသည်၊ တွေ့ ရာချုံထဲ ခေါင်းထိုးပြီး ---
---အရှင်ဖမ်း ---အရှင်ဖမ်း---ဟုအော်သံကြားနေရသည်၊ မကြာမီ ရန်သူ့ထံမှ ပစ်ထုတ်လိုက်သော ဂျီသရီကျည်ဆံ တစ်တောင့် ရဲဘော်ရှန်သို၏ ဘယ်ဘက် ခြေထောက်သို့ ဖြတ်မှန်သွားသည်၊
---ထိပြီ--ငါ့ကိုထိပြီ--ဟု အနီးအနားမှ ရဲဘော်ကို တီးတိုးပြောလိုက်သည်၊ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ မှာ ရန်သူနှင့် ဘတပြန်။ ကျားတပြန် တိုက်ပွဲဖြစ် နေသည်၊ ရန်သူသည် ကျနော်တို့ အဖွဲ့ရွာထဲရှိမည် အထင်နှင့် လက်နက်ကြီးများ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး ပစ်သွင်းနေသည်၊
-----ဟေ့ကောင်---အရှင်ဖမ်းမယ် ဆိုတဲ့အကောင်-- တက်ခဲ့ စမ်း- - - -
----ကျောင်းသား တပ်မတော်ကွ။ မင်းတို့ ကို မကြောက်လို့ --တော်လှန်ရေးလုပ်နေတာကွ၊
ရဲဘော်ရှန်သို၏ စိတ်ဓါတ်ကျသံ၊ သူ စိတ်ဓါတ်ကျမည်ဆိုလည်း ကျလောက် ပါသည်၊ ဒါဏ်ရာ ရထားသည့် နေရာနှင့် အရှေ့ တောင်မှာ (၃)နာရီ ခန့် ဝေးသည်၊
---ဘာပြောတယ်။ ထားခဲ့ ရမယ်ဟုတ်လား။
---မင်းကို လုံးဝမထားခဲ့နိုင်ဘူး၊--မင်းနဲ့ အတူ ဒီတိုက်ပွဲမှာ ငါတို့ အသေခံမယ်-အားမငယ်နဲ့ -- ငါတို့ ရှိတယ်၊
ကျနော့် မျက်ရည်တို့ အတိုင်းမသိစို့ တက်လာသည်၊ ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဆိုတာ ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေမျိုးမှာ တွေ့ ခဲ့ရသည်၊ ဒေါသ လည်းထွက်။။
အင်းကြီးပေါက် ဘုန်းကြီး ကျောင်းဝင်း ထဲမှ ဖြတ်ှု လယ်ကွင်း အစပ်တွင်ရှိသော တဲကုတ်ထဲမှ တဲတိုင်ကို ဇောဖြင့်နှုတ် နေမိသည်၊
--ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့ --ဒါဏ်ရာက ဘာမှမဖြစ်ဘူး-ဟု ရဲဘော်ပံသုမှ ပြောလည်းပြော။ လက်တဘက်မှလည်း ဆေးထိုး အပ်ဖြင့် ကျွမ်းကျင်စွာထိုး နေပုံ၊ ရဲဘော၇ှန်သို. ဒါဏ်ရာ မှာ ညာဘက် ခြေထောက် ခြေသလုံး အရိုးမကြီး ကိုဖြတ်မှန် ထားရာ ထိုအရိုးမကြီးမှာ ကျိုး၍ အသားစများ ဖွာလန်ကျဲ နေပြီး သွေးများ ပန်းထွက် နေသည်၊ စိတ်ထဲ၌ သိလိုက်၇တာ ကတော့ ခြေထောက် ဖြတ်၇ တော့မည်၊ ဒီအတွေးတွေ တွေးပြီး တိတ်တဆိတ် ငိုကြွေးသံများ ညယံ့ တီးတိုးကြားနေ ရသလို၊
ရန်သူသည်သူ့ ဘက်တွင် အထိနာ၍ ရှေ့ ဆက်မတိုးနိုင်ဘဲ စစ်ကူးခေါ်သံအတိုင်းသားကြားနေရသည်၊ ကျနော်တို့ ယာယီ ပစ်ခတ်နေသည့်နေ ရသည်နေရာမှာ လယ်ကစင်းရိုး ကို အကာအကွယ်ယူပြီး ပစ်နေရသည်၊
ရဲဘော်ရှန်သိုကို စစ်ပုခက်ဖြင့် ထမ်းပိုးကြသည်၊ လရောင်က မိုးလင်းလုနီးမို့ လား မပြောတတ် လယ်ကွင်းပြင်တခုလုံးထိန်ဝါနေသည်၊ စိုးရိမ်သောက စိတ်တွေဖြင့် အရှေ့ တောင် သို့အမြန်ရောက် စေချင်သည်၊
----ဟေ့ --ရှေ့ ကလယ်ကွင်းကြီးကိုဖြတ်လိုက်--ဆိုတော့လမ်းပြက--
ဒီအင်းကို အင်းကြီးပေါက်လို့ ခေါ်တယ်၊ ဒီအင်းကြီးက ဆင်တောင်သေတယ်၊
ဆိုတော့-ကျနော်လည်းဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်တော့၊ အင်းကြီး.ဘေးပတ်ပတ်လည်မှ ကွင်း၍ နှောက်ချေးခြောက် တောင်ခြေသို့အရောက်ထမ်း ကြသည်၊ ရဲဘော်ရှန်သို၏ ခန္ဒာကိုယ်မှာ ပုခက်ဖြင့် ထမ်းသည့်အခါ အတော်လေး၏၊
မကြာခင်လူလဲ၍ ထမ်းကြရသည်၊ ရှေ့ က ပွိုင့်ထွက်သူများက ကြိုတင် ကာကင်းယူပေး ရသည်၊ ဖြတ်လျှေဋက်ရသည့် လမ်းများမှာ ကျောက်တောင် တွေဖြစ်သည်၊ တခါတရံ တောင်နံရံများကို အထမ်းဖြင့် တက်သည့်အခါ များတွင် ခက်ခက်ခဲခဲ နိုင်လှသည်၊
လမ်းတစ်လျှောက်တွင် သွေးစများ အင်ဖက်ခြောက်များ ပေါ်တွင်ကျခဲ့.၊ ထိုအင်ဖက်များကို ရန်သူမှ ခြေရာကောက်ပြီး ကျနော်တို့ နောက်သို့ခြေရာခံလိုက် လာနိုင်သည်၊ ထို့ ကြောင့် ခြေရာခံ၍ မရအောင် ခြောက်သွေ့နေသော တောကြီးကို မီးရှို့ ခဲ့ရသည်၊
မိုးလင်းစပြုပြီ၊ ဘယ်နေရာရောက်နေသည်မသိ၊ ပါတ်ဝန်းကျင်တခုလုံး တောမီးခိုးတွေဖြင့် အူ၍ ဖုံးလွှမ်းနေသည်၊ မကြာ မကြာတောကြက်တွန် သံကြားရသည်၊ လှည်းလမ်း ကြောင်းပေါ်၍ တောင်ပေါ်တက်သည့် နွားလှည်းမောင်းသံကြားနေရသည်၊ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ မှာ လမ်းကြောင်းအတိုင်းမဖြတ် တော့၊ တောတိုး၍ စခန်းရှိရာသို့ တဖြည်းဖြည်းနှင် ကြရသည်၊ တညလုံး မလိပ်ပဲ တိုက်ပွဲဖြစ် ခဲ့သည်၊
ခရီးနှင်ခဲ့သည်၊ ရေကမရှိ နွမ်းဟိုက်၏၊ တယောက် မျက်နှာ တယောက်ကြည့် ဟန်ဆောင် အပြုံးများဖြင့် အပူအပင်တွေကို အကာ အကွယ်ယူရင်း ရဲဘော်ရှန်သိုအား စိတ်ဓါတ်မကျရလေအောင် ရယ်မော စရာများပြော၍ နှစ်သိပ်ကြ၊
ရွက်စည်ပိုင်းရွာမှ ရွာသားအချို့ကျနော်တို့ ရှိရာသို့ရောက်လာကြသည်၊ ထမင်း ထုတ်များ။ ရေဗူးကိုယ်စီဖြင့်၊ ကျနော်တို့ အားတက် ဝမ်းသာမိ သည်၊ သူတို့ မှ ယခု နေရာတွင် ကြာကြာ မနေရန်နှင့် ယခင်စခန်းသို့ အရောက်သွားရန် တိုက်တွန်း ကြသည်၊
ရဲဘော်ရှန်သိုအား ရွာသားများမှ တလှည့်စီ ထမ်းထုတ် သွားကြသည်၊ စခန်းဟောင်းသို့ ရောက်မှ စိတ် ဒုန်းဒုန်းချ၍ အနားယူ လိုကြသည်၊ ရဲဘော် ရှန်သိုကြီးကိုတော့ ဆေးမှူးမှ ဒိုင်ယာစီဗင် ထိုးပေးပြီး သက်သောင့်သက်သာ အနားယူ စေသည်၊
နောက်တစ်နေ့ -နံနက်တွင် မနေ့ က တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည့်သတင်း ပြန့် နှံ့ သွားသည်၊ ခလရ(၂၃၂)စစ်ကြောင်းနှင့် ကျနော်တို့ အလုပ်အဖွဲ့တိုက် ပွဲဖြစ်ရာတွင် ရန်သူ့ ဘက်မှ တပ်ကြပ်ကြီး (၁)ဦးမှာ ခွန်းကိုးမမ-ထိ၍ သေဆုံးသွားကြောင်း။ တပ်သားနှစ်ဦးပါ ကျဆုံးကြောင်း။ အချို့ ဒါဏ်ရာအနည်း အငယ်စီ ရသွားကြောင်း သိရသည်၊ ပိုမိုခိုင်မာသည်က နံနက်ခင်းတွင်-အင်းကြီးပေါက် ရွာထဲသို့ကားဖင်ထိုး၍ ရန်သူမှ ဒါဏ်ရာရ သူများကို ကားဖြင့် တောင်ငူဘက်သို့သယ်ဆောင် သွားကြောင်း သိလိုက်ရသည်၊
ထိုရွာလေးမှာ အထူးဒေသတောင်ခြေအစပ်တွင် တည်ရှိသည်၊ အောက်ကွင်းမှ ဈေးရောင်း။ ဈေးဝယ်များရောက်တတ်သည်၊ သတင်းထူးကြား ရ၍ ထို ရွာလေးတွင် ခေတ္တ နားကြမည်၊ ရွာသားအချို့ကျနော်တို့ ကိုတွေ့ သောအခါ- မြို့ ပေါ်ရောက်သွားရင် ကျနော်တို့ ကို မမေ့နဲ့ နော်၊ -ဆရာတို့အခုလာတာ လိပ်သိုကိုသွားမလို့ လား- ဟိုမှာ ဗိုလ်အားဒီတို့ ရောက်နေပြီ။ ကျနော်တို့ ကိုမှာလိုက်တယ်-
--ဗိုလ်ဒိုးဒိုတို့ အဖွဲ့နိုဝင်ဘာ(၂)ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား ပြီး သူတို့ နဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်း ပါ တဲ့-၊
သွားကုန်ပြီ၊ ကြားဒေသမှ ကေအန်ယူတပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်အားဒီ။ ဗိုလ်ကွယ်မှူး။ သန်းမြင့်။ ကျော်ဝေတို့တပ်ခွဲတခွဲလုံး ရန်သူတပ် စွဲထားသည့် လိပ်သိုလ် စခန်းတွင် လက်နက်ချ အညံ့ခံကြ ပြီတဲ့၊ ရေဒီယိုမှ ကြားလိုက်တော့ ဒီသတင်း ပိုမှန်သွားသည်၊
ရန်သူ နိုင်အောင်ထွန်းနှင့် စစ်တိုင်းမှူးတို့ က လိပ်သိုလ်တွင် ကြိုဆိုရေး စခန်းများဖွင့်ပြီး ခမ်းနား ကြီးကျယ်စွာ ကျင်းပကြ တယ်လို့ သတင်းကြားရသည်၊
ရန်သူ၏ မာယာ ပရိရာယ်ထဲ ဗိုလ်အားဒီတို့ ရောက်သွားကြပြီ၊ လက်ရှိ ကျန်ရှိနေသည့် မကဒတအလုပ်အဖွဲ့ နှင့် ကေအန်ယူအဖွဲ့ တွေကို ခရစ်ယာန် ဘာသာ ရေးလူကြီးများ။ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် အဖွဲ့ဖွဲ့ ပေး ပြီး ကျနော်တို့ ထံ လူများနှင့် တဖုံ။ စာများနှင့် တကမ်း။ လာရောက်စည်းရုံးကြသည်၊ မကြာခင်မှာပဲ အညံ့ ခံသွားသည့်အဖွဲ့ ကို ရန်သူမှ -လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်သည့်အဖွဲ့ -လို့ အမည်တပ် ပြီး လူထုကို လိမ်ညာဝါဒဖြန့် ကြသည်၊ လူထုမှာ နှစ်ဘက် ပေါ်လစီအပေါ် ယုံမှားသံသယ များဖြစ်လာ ခဲ့သည်၊
၁၉၉၇ခုနှစ်။ နိုဝင်ဘာ(၁)ရက်နေ့ တွင် -နအဖ-ဆိုပြီး ပြင်ဆင် နာမည်တပ် လိုက်ကြသည်၊ ကျနော်တို့ မှာ လက်ရှိဒေသတွင် လက်ရှိအင်အား ဖြင့် အခြေခံဒေသတွင် ဆက်လက်ရပ် တည်ရန် အခက်အခဲ ရှိလာသည်၊ ကျနော်တို့ နောက်ကျောမှ ကယန်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ မှာလည်း ရန်သူနှင့်တွဲပြီး ယခုအထူး ဒေသမြောက်ဘက် ကိုဒစ်ရွာမှစ၍ နယ်မြေရှင်းလင်ရန် အစီ အစဉ်ရှိသည်ဟုသတင်းအခိုင်အမာ ရထားသည်၊ ကျနော်တို့ ရပ်တည်နေသည့် ဒေသကိုအညံ့ ခံသွားသည့်အဖွဲ့ မှသူတို့ လူမျိုးဒေသ ဖြစ်သည့်အတွက် အုပ်ချုပ်ရေးကို သူတို့ ပဲကိုင်တွယ်မည်။ထို့ ကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမကိုင်မှီအချိန် အတောအတွင်း ကျန်ရှိနေသည့် ကျနော်တို့ နှင့်ကေအန်ယူ အဖွဲ့ တို့ အားအထူးဒေသမှထွက်ခွာသွားဖို့စာထုတ်လာသည်။ကျနော်တို့ မှတပ်ဖွဲ့ အတွင်းမဟာမိတ်အတွင်းသဘောတူညီမှုကို ဆွေးနွေးပွဲတွင် ညှိနှိုင်းပြီး လက်ရှိဒေသ၌ ရပ်တည်လို့ ရသ၍ ရပ်တည်မည်ဟုသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ ကြသည်၊
ထို့ ကြောင့် (၂)ဖွဲ့ မှ ရဲဘော်များကို တစ်ဖွဲ့တည်း ပေါင်းပြီး တောင်ဘက်။ မြောက်ဘက်အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ ခွှဲု ဆက်လက် လှုပ်ရှားကြမည်။
မြောက်ဘက် သစ်တောကြိုးဝိုင်း၌ ကယန်း လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တဖွဲ့သစ်တွေခိုး ထုတ်နေသည်ဟု ကေအန်ယူမိုင်းဆရာ ကိုကြီးမှ ပြော၏၊ ထိုသစ်တောမှာ ကေအန်ယူနယ်မြေထဲမှ သစ်များဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့် သစ်များ ဆက်လက် ထုတ်ယူဘို့ မလုပ်ရန် ဦးကိုကြီးမှ ကယန်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများထံ စာပို့ သည်။စာပို့ ပြီးနောက်ရက်အနည်း ငယ်အတွင်း ထိုသစ်တော အတွင်းမှ မိုင်းကွဲသံ ကြားရသည်။သတင်းကို အသေအချာ လိုက်ကြည့်တော့ ကယန်းပြည်သစ် အတွင်းရေးမှုး ဗိုလ်အိုက်ဒေါင်းမှာ မိုင်းထိ၍ ခြေတဘက် ဖြတ်ပစ် လိုက်ရကြောင်းသိရ၍ စိတ်မကောင်း များစွာဖြစ်မိ သည်။ နောက်ပိုင်း ကေအန်ယူနှင့် ကယန်းပြည်သစ်မှာ စေ့စပ်၍ မရပဲ နှစ်ဘက်တင်းမာမှု များဆက်ရှိလာ ခဲ့သည်၊အုပ်ချုပ်ရေးရွာအများစုမှာ စည်းရုံးရေး နှစ်ခုဖြစ်နေ၍ မည်သည့်အဖွဲ့ ဘက်လိုက်ရမှန်း မသိဖြစ်နေချိန်၊ ယခင်လိုပုံမှန်အတိုင်း ရွာများတွင် ဆတ်သားရှိမှု မလုပ်တော့။လက်နက်နှင့် ငြိမ်းချမ်း ရေး လဲလှယ်သည့်အဖွဲ့ များမှလည်း ရန်သူနှင့်ပူးပေါင်းပြီး လက်ရှိဒေသကို နိုဝင်ဘာ။ ဒီဇင်ဘာ။ နှစ်ကုန်ပိုင်းအပြီး ထိုးစစ်ပြု လုပ်မည်ဟု လည်းကောင်း။ ထိုးစစ်မပြုလုပ်မှီ အချိန် အတောအတွင်း ဥပဒေဘောင် အတွင်းသို့ကျန်ရှိနေသည့် ကေအန်ယူနှင့် မကဒတအဖွဲ့ များ အချိန်မှီ လာရောက် လက်နက်ချရန် အမျိုးမျိုး ဝါဒဖြန့် လာသည်၊ သို့ သော်ကျန်ရှိနေသော နှစ်ဖွဲ့ ၏ သဘောထားမှာ လက်နက် မချရေး။လက်ရှိဒေသမှာ အင်အားရှိ သလောက်ဖြင့် ဒေသပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးကို အခိုင်အမာ လုပ်ဆောင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထား ကြသည်၊ အချို့ရဲဘော်များ မှာ စိတ်ဓါတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်မရှိပဲ ရန်သူ.ဝါဒဖြန့် မှုအ ပေါ် ယိမ်းယိုင် သလိုဖြစ်နေ.၊ ဖြစ်လည်းဖြစ် ချင်စရာ၊ စစ်ရေးအရ ထောက်ပံ့ရေး အရ။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း ကြောင်းများ ပိတ်ဆို့ ထားမှုရှိ နေသည်မှာ ငြင်းဖွယ်ရာ မရှိပေ၊
သို့ သော် ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှု အတိုင်း ကျေးရွာများကို အုပ်ချုပ်ရေး ပြန်လည် ချမှတ်လုပ်ဆောင်နေချိန့် ရန်သူနှင့် ဖောက်ပြန်ရေး အဖွဲ့ များ ပူးပေါင်းပြီး တော်လှန်အဖွဲ့ အစည်းများ စခန်းချရာ နေရာများသို့စစ်ကြောင်းများဖြင့်လာရောက်ပစ်ခတ်တတ်သည်။
မြောက်ဘက် သာမိတိုက်အုပ်စု။ သစ်အယ်တောင်နှင့် ဗုံတောင်အကြား၌မကဒတအလုပ်အဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့စခန်းချသည့် နေရာအား ရန်သူမှ သတင်း ရ၍ -၁၂။ ၃။ ၉၇နေ့ညနေက တည်းမှ စစ်ကြောင်း(၂) ကြောင်းဖြင့် ခလရ (၂၃၂)။ စစ်ကြောင်းမှူး နိုင်အောင်ထွန်း ဦးစီးပြီး ၁၃။ ၃။ ၉၇နေ့ နံနက် စောစောပိုင်း တွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ကြ၍ မကဒတမှ ရဲဘော်ဒွန်းနှင့် ရဲဘော်တုတ် ကြီးတို့ ကျဆုံး ခဲ့သည်။
မဟာမိတ် ကေအန်ယူ ကာကွယ်ရေး ရဲဘော် ဖက်ရွက်ကိုလည်း (၂၃၁) စစ်ကြောင်းမှ ရက်ရက် စက်စက် သတ်သွားခဲ့ ကြသည်၊ရဲဘော်တုတ်ကြီးကို ဖောက်ပြန်ရေး အဖွဲ့ နှင့် ရန်သူပေါင်းပြီး လက်ရ ဖမ်းမိသွားကြသည်၊ ရန်သူမှ ရဲဘော်တုတ်ကြီးအား-မင်းတို့ စခန်း ဘယ်မှာလဲ။လက်နက်တွေထားတဲ့ပုန်းတဲဘယ်မှာလဲ- စသဖြင့် မေးမြန်းရာ ရဲဘော် တုတ်ကြီးမှ ဘာတစ်ခွန်း မျပြန်လည်ဖြေကြားမှု မလုပ်ပဲ သူက- မင်းတို့ ငါ့ကိုဖမ်းမိပြီပဲ ဘာမှဖြေစရာမရှိဘူး-ငါ့ကိုသတ်လိုက်-ဟုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်၊ ရန်သူ့ ခလရ (၂၃၂)မှ တပ်ကြပ်ကြီးတစ်ဦးမှကွမ်းသီးလှီးသည့်ဓါးဖြင့် ရဲဘော်တုတ်ကြီးအားလက်ပြန် ကြိုးတုတ်၍ အရှင် လတ်လတ် လည်ပင်းကိုလှီး၍မသေမချင်းသတ်ဖြတ်သွားခဲ့ကြသည်။
ရဲဘော်တုတ်ကြီးအလောင်းကိုကျွန်းတောကုန်းနှင့်မဏပ်တောင်အကြားလမ်းမကြီးဘေးညောင်ဝါပင် ခြေရင်း၌ မြုတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ထိုအချိန် ရဲဘော်တုတ်ကြီးအား အရှင်ဖမ်းမိသွား၍ကျနော်တို့အလုပ်အဖွဲ့ မှရဲဘော်များမှာ ရဲဘော်တုတ်ကြီးကိုရန်သူ့လက်တွင်းမှကယ်ထုတ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ် ကြိုးစား ခဲ့သော်လည်း အချည်းအနှီး သာဖြစ်ခဲ့ရသည်။မိုင်းကွင်းတွေဖြတ်။ရန်သူလာနိုင်သည့်လမ်းတွေကို ဖြတ်စောင့်သော်လည်းရန်သူကမလာ။နောက်ဆုံး၌ ရဲဘော်တုတ်ကြီး ရန်သူကိုခေါင်းမာစွာတုန့် ပြန်ပြီး နောက်ဆုံးအကြိမ်အထိအသက်အသေခံသွားသည်ဟုသတင်းကြားရတော့မှလက်လျှော့လိုက်ရ တော့သည်။ ရဲဘော်တိုင်း၏ စိတ်ထဲတွင် ရဲဘော် တုတ်ကြီး၏ စိတ်ဓါတ်နှင့် သတ္တိကို တသသ လေးစားလွမ်း ဆွတ်ရင်း ဂုဏ်ပြုချီး ကျူးမှုဖြင့်သာ ကျန်ရစ်နေခဲ့သည်၊ (၁၉၉၇ ခုနှစ်။ မတ်လ(၁၃)ရက်။ဖုန်းမော်နေ့တွင် ကျဆုံး သည်၊)
Posted by victorOway at 2:25 PM No comments:
Posted by victorOway at 9:18 AM No comments:
တောသီးခို(နတ်တောင်)တောင်ကြောပေါ်မှဖြတ်ရမည်။ နတ်တောင်မှာ တပ်မဟာ(၂)နယ်မြေ တစ်ဝိုက်တွင် အမြင့်ဆုံး တောင်ကြီး ဖြစ်သည်။ဗမာပြည်မှ အင်္ဂလိပ်တပ်တွေဆုတ်ပြေးတုန်းက နတ်တောင် ကြောပေါ်တွင် စခန်းချသွားဖူးသည်ဟု အဖူးပြောပြ ထားသည်။ နတ်တောင်မှာ ကေအန်ယူ နယ်မြေနှင့် ကရိန်နီ နယ်မြေတို့ ၏ နယ်စပ် တောင်ကြောဖြစ်သည်။ နတ်တောင်ကြောအပေါ်မှ အရှေ့ ဘက်သို့ လှမ်းကြည့် လိုက်လျှင် မော်ချီးမြို့ ကို ခေတ္တမျှ မြင်ရသည်။ နတ်တောင်ကြောမှာ အလျားအရရှည်လျှားသကဲ့သို့ အနံအရကျဉ်းသော တောင်ကြောဖြစ် သည်။ ဆီးနှင့်များဖုံး လွမ်းနေ၍ တစ်နေရာနှင့်တစ် နေရာသဲကွဲစွာမမြင်ရ။ ထိုတောင်ကြော ပေါ်တွင် ဆေးဘက် ဝင်ပန်းခါးပင်များ အလေ့ကျ ပေါက်နေတာတွေ့ ရ၍ ကျနော်တို့နှုတ်ပြီးကျောပိုးအိပ်ထဲက်ိုယ် စီထည့်လာကြ သည်။ယခင်တုန်းက အင်္ဂလိပ်တွေ စခန်းချသွားသည့် နေရာတွင် ကော်ပန်း ဝါကြီးတွေတမျှ ဖူးပွင့် နေသောပန်းပွင့်များ အကြားတွင် စစ်ကားဘော်ဒီ အဟောင်းများ။ ကတုတ်ကျင်းကြီးများ။ ဆင်ထောင် ဖမ်းသည့် မြေကျင်း နက်ကြီးများတွေ့ ရသည်၊ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ မှာ တောင်ထိပ်သို့ မရောက်နိုင်သေး။ တောင်ကြောကြီးမှာ နှင်းမြူပင်လယ်ကြီးအကြားတွင် ရှိ၍ တခါတခါ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် အကွာ အဝေးတောင်မမြင်ရ။ အတော်အေးစိမ့်၍နေသည်။ ရေခိုးရေငွေးများမှာ ပြောင်းပြန်ကျနေသည့်အလား ရှိုမြောင်တွေထဲတွင်၊ နယ်မြေခံလမ်းပြမှာ ဒီခရီးနှင့်အတော်ရင်းနှီးပုံရသည်၊ကျနော်တို့ ထမင်းချက်ဘို့အချိန် ရောက်တော့ ညခုနှစ်နာရီထိုးချေပြီ။ ရေလည်း ရှိလိမ့်မည်ဟု မထင်။ လမ်းပြမှာကျနော်တို့ နှင့်မလှမ်းမကမ်းသို့သွားပြီး တောင်ကမ်းပါးယံသို့ ဆင်းသွား ပြီး မကြာမီ ထိုသူမှ လက်ရပ်ခေါ်၍သူ့ လက်ဖြင့် ယက်ထားသည့် မြေ ကျင်းထဲမှ ရေတွေထွက်နေသည်ကိုကြည့်ပြီး ထိုသူကို ကျေးဇူးတင်၍ မဆုံးအောင် ဖြစ်မိသည်။ မိမိ၏ပထဝီကို မိမိပိုင်သည် ဆိုသည်မှာ ထိုအချက်တွေပဲဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ ထမင်းတည်ပြီး ပါလာသည့် ရိက္ခာခြောက် များဖြင့် ညစာထမင်းကို အားပါးတရ စားပြီး နတ်တောင်ကြီး. တိတ်ဆိတ်မှု။ နှင်းခိုးမှုန်တွေကို စစ်မိုးကာဖြင့် ခုခံရင်း သုံးယောက်သား တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကျောခြင်းကပ်ရင်း ရေဒီယို နားထောင်ကြရင်းအိပ်ပျော် သွားကြသည်၊ နံနက်မိုးသောက်တော့ ပစ္စည်းတွေသိမ်းတော့ ရေဒီယိုပျောက် နေသည်။ တကျီကျီနှင့် အော်သံကြား၍ လိုက်ရှာကြည့်ရာ ရေဒီယိုမှာ မြေပျော့ထဲတွင် ညက ဖိနပ်ဖြင့် မမြင်မစမ်း နင်းမှို နစ်ဝင်နေသည်။
စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တော်လှန်ပြီး လူထုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲဘို့ ဆိုသည်မှာ ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွင်း၌ နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိမှ ဖြစ်မည်။ လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသည့် အခြေအနေများတွင် တိုင်ပြည် အာဏာအလုံးစုံကို စစ်အုပ်စုမှ အကြွင်းမဲ့ချုပ်ကိုင်လွှမ်းမိုး ထားသည့်အပေါ့် ကျနော်တို့ ၏ နိုင်ငံရေး လွတ်လွတ် လပ်လပ် ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် မလှုပ်ရှားနိုင်ပါ။ ဤအချက်တွေက ကျနော်တို့ ကို တော်လှန်ရေးလက်တွေ့ဘဝထဲသို့တွန်းပို့ပေးနေသည်၊ ထို့ ကြောင့်ကျနော်တို့ သည် စစ်အုပ်စုကို လက်နက်ကိုင်တိုက်မှ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတစ်ခုကို တည်ထောင်နိုင်မှာဖြစ်သည်။ လက်နက် ကိုင် တော်လှန်ရေး နယ်မြေများ၌ တော်လှန်ရေး အင်အားစုများနှင့် စုပေါင်းပြီး နိုင်ငံရေး ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ချမှတ်ခဲ့ကြသည်။
တော်လှန်ရေး အခြေခံ ဒေသ တစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်ဘို့ အတွက် စစ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့ အစည်းတွေနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှု ပြုကြရသည်။ တဘက်မှလည်း ရဲဘော်တွေအားလုံး အတွေး အခေါ်အရတည်ဆောက်ရေး။ သဘောတရား အရတည်ဆောက်ရေး။ အမိန့် နာခံမှုအရတည်ဆောက်ရေးဆိုပြီး တပ်တည်ဆောက်ရေး ကို ပြုကြရ သည်။ ထိုသို့ အသားကျထားပြီးသား ရဲဘော်တွေကို စီစစ်ရွေးချယ်ပြီး ယခုလိုအခြေခံဒေသ ထိုးဖောက်ရေး ခရီးစဉ်ကို မကဒတ ခေါင်းဆောင်များမှ ဦးဆောင်ပြီး စတင်ထိုးဖောက်ဘို့ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ယခု ကျနော်တို့ အဖွဲ့ အခြေခံဒေသထိုးဖောက်ရေး ရောက်ရှိခဲ့ကြပြီ။ အစဦး၌ဒီဒေသကို ရောက်ရောက်ခြင်း ဒီဒေသ၏ လူထုအခြေအနေ။ အခြေခံ ဒေသ၏ ပထဝီအနေအထား။ ရန်သူ့ တပ်လှုပ်ရှားမှု။ စသည်တို့ ကိုလေ့လာရသည်။ ကျနော်တို့ ထိုးဖောက်သည့် အခြေခံဒေသမှာ မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံ့ ထောက်ကြည့် လိုက်လျှင် အချက်အခြာဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်တည်နေတာကိုတွေ့ ရမည်။ ၁၉၆၂ခုနှစ် ဗိုလ်နေဝင်းစစ်အုပ်စု တိုင်းပြည်ကို မတရားသိမ်းပိုက်၍ မကြာခင် လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ထိုလက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်မှုကြီး အရှိန်အဟုန်ကြီးချိ်န် ပြည်တွင်း စစ်ဖြစ်နေချိ်န်အတွင်း ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီ ရဲဘော်များ ထိုဒေသ အတွင်း စစ်ရေးအရ။ စည်းရုံးရေးအရ အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည့် အခြေခံဒေသကြီး ဖြစ်သည်။ ထိုဒေသ အတွင်းရှိလူထုမှာ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အသားကျထားပြီးသား ဖြစ်၍ကျနော်တို့ မှတဖန် ပြန်လည် ထိုးဖောက်သည့်အချိန့် လည်း လူထုမှတက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာ တွေ့ ရခြင်းအားဖြင့် ကျနော့မှာ အံ့သြလေးစား၍ မဆုံးဖြစ်နေ မိသည်။ထိုဒေသရှိလူထုမှာအများအားဖြင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားအများစုနေထိုင်ကြသည်။ ကရင်းလူမျိုးများစွာ ရှိသည့်အနက်မှ ထိုဒေသအတွင်းနေထိုင် ကြ သည့်ကရင်လူမျိုးအများစုမှာ ဂေခို။ ဂေဘား။ သာမိတိုက် လူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ ပထဝီအနေ အထားအရ လက်ရှိဒေသ. အရှေ့ နှင့်အနောက်မှာ အလျား အရ ရှည်လျှား၍ တစ်ရက်ခရီးခန့် ရှိမည်။ အရှေ့ ဘက်တောင်ကြောအဆုံး၌ တောင်ငူလွိုင်ကော် ခြောက်ပေကားလမ်းတစ်ခု တည်ရှိသည်၊ ကားလမ်း၏ အရှေ့ ဘက်ကို ကြားဒေသဟုခေါ်တွင်ပြီး ကျနော်တို့ ၏ယခုရောက်ရှိသည့်ဒေသကို အခြေခံဒေသတည်ဆောက်ရေး၏ အထူးဒေသ ဟုခေါ်သည်။
အထူးဒေသတွင်ရွာပေါင်း (၁ဝဝ)ကျော်ရှိသည်။ ဘာသာစကားပြောကြရာတွင် တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ စကားပြောဆိုမှု မတူအနည်းငယ်ကွဲပြားကြ သည်။ အထူးဒေသတောင်တန်း၏ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ရန်ကုန်မန္တာလေးလမ်းမကြီးကို လှမ်းမြင်တွေ့ နေရသည်။ မကြာခင်ကမှ ရန်သူနှင့် အပစ် ရပ်ထား သည့် ကယန်း ပြည်သစ်ပါတီ အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေနှင့် ကေအန်ယူအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေနယ်နိမိတ်နှစ်ခုကို နန်းချိုချောင်းနှင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထား သည်၊ အနောက် တောင်ခြေ တည့်တည့် စစ်တောင်း မြစ်ကြီးကို လှမ်းမြင်တွေ့ ရသည်။စစ်တောင်းမြစ် အရှေ့ ဘက် ကမ်းပေါ်ရှိ ဧရိယာကို မဒညတ ( မြန်မာပြည် ဒီမိုကရက်စီ ညီညွှတ်ရေးတပ်ဦး) နယ်မြေဟုသတ်မှတ် ထားကြသည်။ အထူးဒေသ အတွင်း(၄၅)ဒီဂရီမျဉ်း. အရှေ့ ဘက်တွင် ဂေဘား လူမျိုး အများစု နေထိုင်ကြပြီး အများအားဖြင့် ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းဖြင့် (၄၅) ဒီဂရီမျဉ်း၏မြောက်ဘက်တွင် တောင်ငူလယ်သမား မိသားစုအများအပြား နေထိုင်ကြ သည်။ တောင်ယာခုတ်ခြင်း။ လယ်ကျင်းများတွင်စပါး စိုက်ပျိုးခြင်း များဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ မြို့ ပြနှင့်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အတော်ခက် ခဲ၏။၊ အထူးဒေသ အနောက်ဘက်တောင်ခြေ အစပ်တွင် ပျဉ်းမနားဘက်မှ ဖြစ်ဟန်တူသော ကရင်တိုင်းရင်းသား အများစု နေထိုင်ကြသည်၊၄င်းတို့ ကို သာမိတိုက်လူမျိုးဟုခေါ်သည်၊ အားလုံးလိုလိုမှာ ဗုဒ္ဒဘဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပြီးနှမ်းခင်းများ။ လယ်ကွက်။ ဥယျာဉ်ခြံမြေ။ မြေပဲခင်းများ စိုက်ပျိုးကြပြီး အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။ အောက်ကွင်းမှ ဗမာများမှ ဈေးကုန် များ။ အထမ်း။ အရွက်များဖြင့် တောင်ပေါ်သို့ ကွမ်း။ ကွမ်းသီး များဖြင့်လဲလှယ်၍ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။အထူးဒေသ အတွင်း ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ များမှာ-ခရစ်ယာန်။ အင်္ဂလီဂန်။ ဗြဟ္မစို။ အာစီ။ ဗုဒ္ဒဘာသာ စသည်တို့ ဖြစ်ကြသည်။အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သလို ၄င်းဒေသ့ရွာပေါင်း(၁၅ဝ)ခန့် ရှိကြသည့်အနက် ထိုရွာများကို အုပ်စုလိုက် ခွဲခြား သတ်မှတ် ထားကြသည်၊ ရှမ်းလယ် ပြင်အုပ်စု။ ချဉ်ပတောင် အုပ်စု။ သာမိတိုက်အုပ်စု။ ထမုံအုပ်စု စသည်များဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ် ထားကြသည်။
အထူးဒေသတွင်း(၉ဝ)ဒီဂရီမျဉ်းတည့်တည့် ရှမ်းလယ်ပြင်ရွာကြီးတည်ရှိသည်။ ထိုရွာ။စိုးမိုးတောင်ကုန်း တွင် ရန်သူ့ ဗျူဟာရုံးတည်ရှိသည်။ ထို ဗျူဟာ ရုံးမှတဆင့် စစ်ကြောင်း များကိုဖြန့် ခွဲပြီး လှုပ်ရှားကြသည်။ အထူးဒေသ၏ အနောက်ဘက် စစ်တောင်းမြစ် ၏အရှေ့ ဘက် ပိတောက်ကုန်း ရွာတွင် ထောက်ပို့ စစ်ကြောင်းမှ တာဝန်ယူသည်၊ ရန်သူသည (၄)လပတ်စစ်ဆင်ရေး ပုံမှန်လှုပ်ရှား လျှက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် လွတ်လပ်ရေးလို နေ့ မျိုး။ပြည်ထောင် စုလို နေ့ မျိုးများ၊ နယ်မြေ လုံခြုံရေး အတွက်ဆိုပြီး တပ်အင်အား ထူထပ်စွာ ချတတ်သည်။ တောင်ငူတွင် ထောက်လှမ်းရေး (၃)မှ သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာများ တွင် ရွာသူ။ ရွာသား အချို့ ကို ငွေကြေး အရင်းအနှီး မတည်ပေးပြီး တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အစည်းတွေ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို စုံစမ်း ထောက်လှမ်း စေသည်။သတင်းပေး။ သတင်းယူများလည်းမွေးသည်၊ ရန်သူ့ အချို့ တပ်များမှာ ရခိုင်ဘက်မှ တပ်များ ဖြစ်ကြသည်။ စစ်ကြောင်း မှုးများမှာ ရွာသ ရွာသား များကို အခွန်များ ကောက်ခံကြပြီး ၄င်းတို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အတွက် လဒ်စားကြသည်။ ရန်သူ့ တပ်မှုးများမှာ တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရင်ဆိုင် တိုက်ပွဲဖြစ်ဖန် များ၍၄င်းတို့ခံရသည့်အကြိမ်ပေါင်း များလာသည့်အခါ စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို မပြုလုပ် လိုကြ။ ထိုကြောင့်ရွာ ထဲသို့ ဝင်လျင် ရွာသားများကို -မိမိတို့ မှာ အထက်အမိန့် ကြောင့်-လာခဲ့ရသည်ကို တော်လှန်ရေး တိုက်ခိုက်ရေး ပြောက်ကျား များအနေဖြင့် သဘော ပေါက်စေချင် ကြောင်း။ မိမိတို့ အား စစ်ရေးလှုပ် ရှားများ မပြုရန် တောင်းပန် စာများကို ဆက်သားများဖြင့် ပို့ စေသည်။ ရန်သူ့ တပ်များသည် တော်လှန်ရေး ပြောက်ကျား တပ်များ၏ မကြာခဏ ပြောက်ကျား စစ်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်တာ ခံရ၍ ရွာလူထုကို မာန်မဲမှုများ ပြုလုပ်ကြသည်။ ရွာများကို မီးရှိုကြသည်။ ရွာသားများကို တောထဲ တောင်ထဲ လူမမြင်သည့်နေ ရာများတွင် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ် လိုက်ကြသည်။ထိုအခါရွာလူထုမှာရန်သူ့တပ်အားမုန်းတီးစက်ဆုတ်လာကြသည်။ ထိုကဲ့သို့ လူ့ အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်မှုများ ကို အချိန် မဆိုင်းပဲ သတင်းဌာန များသို့ ပို့ ပေး၍ ရေဒီယိုမှ တဆင့်ပြန်ကြား ရသည့်အပေါ် ရန်သူ့ တပ် အကြီး အကဲများမှ လူ့ အခွင့်အရေးချိုး ဖောက်သည့်တပ်မှုး။ ရဲဘော်များကို အပြစ်ပေးခြင်း။ ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခြင်း များပြုလုပ်ကြသည်။ ထို့ ကြောင့် နောင်ဆိုလျင် ရန်သူ့ တပ်များသည် ရွာလူထုကို မစော်ကားရဲ တော့ပဲ တာဝန်ကြေရုံ ထမ်းဆောင်ကြသည်။ထိုအချိန် ကာလများတွင် မိုင်းတိုက်ပွဲ. ထိရောက်မှုများကို မည်သို့မျှမတုံ့ပြန်နိုင်ပဲ ရန်သူ့ တပ်မှာ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ ရပါသည်။ ရံဖန်ရံခါ သတင်းအရ အတိအကျ သိရှိ ထား သည် ဆိုလျှင် ပိတောက်ကုန်းမှ ရှမ်းလယ်ပြင်သို့ ရိက္ခာပို့ သည့်စစ်ကြောင်းများကို ကြားဖြတ်တိုက်၍ ဆက် သွယ် ရေးလမ်း ကြောင်းများကို အခက်အခဲ ဖြစ်စေအောင် ကျနော်တို့ တိုက်ခိုက်ရေး ပြောက်ကျားများမှ တိုက်ပွဲ ဖော် ဆောင်ကြသည်။
ကျနော်တို့ အဖွဲ့ သည်သစ်ခေါင်းရွာသို့ ရောက်သည်နှင့် သတင်းတစ်ခုကြားရသည်။ရဲဘော်အာလူး မိမိ မိုင်းကို ထောင်ရင်း ကက်ပ်ထိ၍ ပေါင့် ဒါဏ်ရာရကြောင်း သိရသည်။ကျနော်တို့ အလုပ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်မှာ ထိုအချိန်က ရဲဘော်လူဇော်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အဖွဲ့ ကိုနှစ်ဖွဲ့ ခွဲ၍ လှုပ်ရှားကြ သည်။ တစ်ဖွဲ့ က အခြေခံဒေသ ထိုးဖောက်ရေးအတွက် အလုပ်အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်ဖွဲ့ မှာ လက်ရှိဒေသ.၏ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။
မဟာမိတ်ကေအန်ယူစစ်ရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ လူထုအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ပြီး ပူးတွဲစစ်ရေးကော်မီတီအဖွဲ့ ဖွဲ့ ၍ တာဝန် ကိုယ်စီ ယူကြရသည်။ ရန်သူ့ သတင်း။ နယ်မြေသတင်း။ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ။ တော်လှန်ရေး၏ ဦးတည်ချက် စသည်များကို လက်ရှိဒေသ လူထုမှ နားလည် သဘောပေါက် စေရန် လူထုများနှင့် အတူ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ကြ၍ လူထုမှာ ကျနော်တို့ ၏မူဝါဒ သဘောတရားများကို နားလည် လာကြသည့်အပေါ် ကိုယ်ရောစိတ်ပါပူးပေါင်းပါဝင်လာကြတာကို တွေ့ မြင်ရ၍ အထူးဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ကျနော်တို့ အလုပ်အဖွဲ့ တာဝန်ယူသည့်ဒေသနှင့် ဗဟိုဌာနချုပ်မှာ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအရ အတော် အလှမ်းဝေးပါသည်။ တခါတရံဗဟိုမှ တောက်ပို့ အားနည်းမှုများရှိပါသည်။ ထိုအခါကျနော်တို့ မှာ ကိုယ့်ဒူးကိုယ် ချွန်ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးရေးမူကို လက်ကိုင်ထားပြီး ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးစားကြရသည်။
မဒညတ (မြန်မာပြည် ဒီမိုကရက်တစ် ညီညွတ်ရေ တပ်ဦး) နယ်မြေများသို့ ကွင်းဆင်း၍ စီးပွားရေးသမားများ (ဥပမာ-သစ်။ အင်း။ဆန်စက်) စသည့်လုပ်ငန်း ရှင်များထံတွင် တော်လှန်ရေး အတွက် ရံပုံငွေ ကောက်ခံကြရသည် ။ ရံပုံငွေကောက်ခံရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို အသေးစိတ်ချပြ ဆွေးနွေး၍ စီးပွားရေးသမားများမှ လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲထည့်ဝင် လှူဒါန်းကြသည်။ ထိုအချိန်က လူထုမှာ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများရှိနေ၍အစစ အရာရာ လာရောက်တိုင်ပင် ညှိနှိုင်းကြသည်။
မှတ်မှတ်ရရသတိတွေရနေမိသည်။ ၁၉၉၆ခုနှစ်။ အောက်တိုဘာ(၃ဝ)ရက်နေ့ ဖြစ်သည်၊ ကျနော်တို့(မိုးကြိုး)အလုပ်အဖွဲ့ မှာ သာမိတိုက် တောင်ခြေရှိ ဆင်အံတောင် ရွာကလေး၌ စခန်းချဖြစ်ကြသည်။ ထို့ နေ့သည်ခါတိုင်းနေ့ တွေလိုပဲ မည်သည့်သတင်းမှ ထူးခြားမှုမရှိသောကြောင့် ယာယီ ပုခက်တဲ ကိုယ်စီ နေရာယူ ကြ သည်။တပ်စိတ်မှုး ရဲဘော်ဇော်လွင်မှာ ပဲခင်းထဲမှ ငြုပ်သီးစိမ်း အချို့ ။ ချဉ်ပေါင်ရွက် အချို့ခူးလာသည်။သူ၏တဲဘေး၌ ရဲဘော် အားလုံးအတွက် ထမင်းချက်ရန် မီးမွှေးနေသည်။ကျနော်က-ဘာဟင်းချက်မလဲမေးတော့ -သူက -ချဉ်ပေါင်ရွက်နဲ့ငြုပ်သီးရောပြီး ချဉ်စပ်လေးချက် မလို့ ဟုပြန်ပြောသည်။ ညနေ ထမင်းချက်ချိန်က မိုးချုပ်စပြုပြီ။ အင်တိုင်းပင်များ အပေါ်မှ ရှဉ့်ကြွက်ကလေးများ မိုးချုပ်စမှာ ဟိုကူး။ ဒီကူးနှင့် တွေ့ နေရသည်။ အင်တိုင်း ပျိုပင်များအပေါ်မှ အရွက် ဖားဖားကြီးတွေက ဆင်နားရွက်ကြီးတွေလို မလှုပ်မခတ်ငြိမ်သက်လျှက်၊။ တချို့ ရေဒီယိုဖွင့်သံ ကြားနေရသည်။ထမင်းချက်သည့်နေရာနှင့်မလှမ်းမကမ်းချုံနွယ်စပ့် တပ်မှုးအချို့ တီးတိုးတီးတိုး ဆွေးနွေး နေသံကြား နေရသည်။ ထမင်းဟန်းကော သုံးလုံးကျပြီး ဟင်းအိုးတည်ချိန့် ရဲဘော်ဇော်လွင်မှ အင်ဖက်တွေခူးလာပြီး ထမင်းစားကြရန် ပြင်ဆင်နေသည်။ တဲတိုက်ဘေးမှ နှုတ်လာသည့် စပယ်လင်ပင်ကို ငါးပိဖုတ် နှင့် ရောထောင်း နေသည်။ ရဲဘော်တွေကို ထမင်းစားကြရန် လှမ်းခေါ်ပြီးမြေဝိုင်း ထမင်းပွဲလေး၌ လက်ရည် တပြင်တည်း ထမင်း လက်စုံ စားကြသည်။ မိုးသားတိမ်လိမ့်တို့ က တောစပ်အရောင်နှင့် မဲမှောင်နေလိုက်တာများ။
သတင်းထူးတာဖြစ်လိမ့်မည်။ ရန်သူမိအိကီးအောက်ရွာ။ ဒါမှမဟုတ် ကြို့ ချောင်းရွာမှာများ ရန်သူ့ တပ် ရောက်နေပြီလား။ခါတိုင်းလိုပဲ။ခေတ္တ စခန်းပြောင်းရွှေ့ တာပဲလား။မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ်းခဲ့၊ ခရီးဝေးမယ်၊
ဟုတ်ပါပြီရန်သူရောက်ရင်ရောက် မဟုတ်ရင် တခုခုတော့တခုခုပဲ။ ကျနော်တို့ ငြိမ်သက်စွာ ခရီးထွက်ကြသည်။ နာရီဝက်လောက်ခန့် သွားရ သည့် နေရာရောက်တော့ လယ်ကွင်းနှင့် အင်တိုင်းတောစပ်။ အရှေ့ ။ အနောက်။ တောင်။မြောက်ကို စိတ်မှန်းဖြင့် ခန့် မှန်းနေမိသည်။ကျနော်တို့ ကျောပေး ထားသည့်ဘက်သို့ ကြည့်လိုက်တော့ တောင်တန်းကြီးက ကျနော်တို့ ကျောဘက်မှာ။ ဒါဆို ကျနော်တို့ ခရီးထွက် နေသည်မှာ အောက်ကွင်း (မဒညတ) နယ် မြေပဲဖြစ်ရမည်။ခြောက်သွေ့ ၍သစ်ရွက်ခြောက်များအပေါ် ဖြတ်နင်းသွားသည့် စစ်ဖိနပ်ခြေရာအသံတွေက သစ်ရွက် ခြောက်တွေကြေမွသွားသည့် အသံနှင့် တပြေးညီစွာ ဆူညံရိုက်ပုတ်ရင်း သက်ငယ်တောကြီး ထဲ၌ စစ်ကြောင်း ခေတ္တရပ် နားကြသည်။မိုးကြိုးအလုပ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရဲဘော်အောင်ကျော်မှ ရဲဘော်အားလုံးစုစည်းစေပြီး ပြောင်သလင်းခါသည့်မြေညီပေါ့် ဝိုင်းဖွဲ့ ထိုင်စေပြီး ယခု ထွက်လာသည့်ခရီးစဉ်ရည်ရွယ်ချက်ကို ဆွေးနွေးတင်ပြ သည်။ မနက်ဖြန်ဟာနိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့ ဖြစ် တယ်။ အဲဒီနေ့ ဟာ မကဒတ မွေးဖွားသန့်စင်ခဲ့သည့် (၉)နှစ် မြောက်နေ့ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလို အခါကြီး။ နေ့ ကြီးမယ် ကျနော် တို့ ရဲဘော်အားလုံး ဝါးရုံလှဲရွာ ကိုချီတက်ပြီး လူထုကို ချပြဆွေးနွေး ရမယ်။လူထုကိုတော်လှန်ရေးထဲ ပါဝင်လာအောင် ဆွေးနွေးစည်းရုံးရမယ်။
တော်လှန်ရေးရဲ့ အခက် အခဲတွေကို လူထုကို ချပြပြီး လူထုနဲ့ တော်လှန်ရေး အင်အားစု တွေ စုပေါင်းပြီး လိုအပ်တဲ့ ကူညီ ပံ့ပိုးမှုတွေကို တောင်းခံသင့် သလောက် တောင်းခဲ့ ရ လိမ့်မယ်၊ဒီတော့ -ဒီခရီးမှာ စစ်ရေးအရ အထူး သတိဝီရိယ ရှိဖို့ ကျနော် ပြောချင်တယ်။ ကျနော်တို့ယခုစည်းရုံးရေး ဆင်းမယ့်နေရာက ရန်သူ့အုပ်ချုပ်ရေး နယ်မြေဖြစ်တယ်။ သိပ်အန္တာရယ်ကြီးပါတယ်။သို့ သော် စိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။ ကျနော်တို့ဘက် မှာ နယ်မြေခဲလူကြီးတွေ ပါတယ်။ သူတို့ က ကျနော်တို့ နှင့်အတူ လှိူ့ ဝှက်စွာ တိုက်ပွဲဝင်ဘို့ ကတိပြုထားပြီးကြပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ကျနော်တို့ မိုးကြိုး အလုပ်အဖွဲ့ ကို (၂)ဖွဲ့ ခွဲပြီး ချီတက်လှုပ်ရှားကြမယ်။ ကျနော်နဲ့ အတူ ရဲဘော်ဂျာ။ ရဲဘော်ဆေး။ နောက်ထပ် ရဲဘော်(၄)ယောက် အတူထွက်မယ်။အုပ်စု(၂)က ရဲဘော်ဇော်လွင်နဲ့ အတူ ခရီးထွက်မယ်။ပထမခရီးထွက်မယ့်အဖွဲ့ က ကျနော်နဲ့ အတူထွက်မယ်၊ ထူးခြားရင် အချက်ပြသင်္ကေတတွေ သုံးပါ၊ စက်နံပါတ်ကတော့ ယခင်ပုံမှန် အတိုင်းရှိထားမယ်၊ လိုအပ်ရင် ညှိနှိုင်းတားတဲ့ နံပါတ်တွေကို အသုံးပြုမယ်။ နာရီဝက် တစ်ကြိမ်စက်ဖွင့်ပါ။ ရန်သူ့ သတင်းကတော့ ထူးခြားမှု မရှိသေးဘူး။ယခုထွက်မယ့်ခရီးက မြေညီ လမ်းဖြစ်တယ်။ကွင်းပြင်တွေ။ တောစပ်တွေ။ နှမ်းခင်းတွေ။ ပဲခင်းတွေ။ ရေချောင်းတွေ ဖြတ်ရမယ်။ စစ်ကြောင်း ထွက်ရင်ဆေးလိပ် မသောက်ပါနှင့် အားလုံးအဆင်သင့် ဖြစ်ရင် ခရီးစထွက်မယ်။ညသည်မှောင်မိုက်လွန်းလှသည်။ မည်သည့်နေရာမှမမြင်ရ။ သစ်ငုတ်တိုတွေတိုက်မိ၊ တောစီး စစ်ဖိနပ် မှာ ရေထဲဖြတ်ရ၍ ရိဆွေစပြု နေသည်မှာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ။ စစ်ဖိနပ်ခြေဖျား အောက်ခြေနှင့် ပိတ်စမှာ ဟပြဲ နေ၍ ခရီးထွက် ရသည်မှာ အဆင်မပြေလှ။ နှမ်းခင်းထဲ ဖြတ်လျှောက်စဉ် သစ်ငုတ် တစ်ခု ကျနော့် ဝမ်းဗိုက် အထိ ရှိမည်။ထိုသစ်ငုတ် တိုကိုမမြင်ပဲ ဗိုက်နှင့်သစ်ငုတ်ထိပြီး ရှေ့ သို့ ကျွမ်းပစ် သွားသည်။ မတတ်နိုင်ပါ ချက်ချင်း ပြန်ထပြီး ရှေ့ သို့ မနည်းမှီအောင် လိုက်ရသည်။အင်တိုင်တောထဲသို့ ဖြတ်စဉ် ရွာလူကြီးမှ လမ်းဆုံ လမ်းခွရောက်တိုင်း မိတ်ဆက် ပေးသည်။ လမ်းခွရောက်၍ ဘယ်ညာ လမ်းနှစ်ခွပြ သည့်နေရာ အရောက် -ဒီဘက်လမ်းက ဝါးရုံလှဲရွာက သွားတာ၊ ဒီညာဘက်လမ်းက ရဲကုန်းရွာကို သွားတာပါ။ကျနော်တို့ နှစ်ဖွဲ့ စလုံး အင်တိုင်းတောစပ်လမ်းနှစ်ခွ့ ကင်းချ၍မြေပြင်အနေအထားကို စောင့်နားထောင် ရင်း ခေတ္တအနားယူကြသည်။ ရုတ်တရက် မိုးက တပြုံတမကြီး ရွာချလိုက်ပါသည်။ ကျနော်တို့ သည်အင်ဖက်များ ခူး၍ တစ်ကိုယ်စာ လုံအောင်စောင်းရင်း မိုးတိတ်သည့် အထိ စောင့်နေ၏။
မိုးကလည်း နိုဝင်ဘာလမှ ရွာရတယ်လို့စိတ်ထဲတစ်မျိုး ဖြစ်နေ မိသည်။ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်လို့ ပဲဖြစ်မှာပါလို့ ဖြေသိမ့်ရင်း -ဟိုးဝေးဝေးက မှိတ် တုတ်မှတ် တုတ်မီးရောင်များ။ အသံချဲ့ စက်မှသီချင်းသံများ ကြားနေရ၏။ ဆောင်းတွင်းမို့ မပြောတတ် အေးလိုက်သည်မှာလွန်ရော။ သွေးပူနေတုန်းမို အေးလို့ အေးမှန်း မသိ၊
ကျနော်တို့ ဝါးရုံလှဲရွာ. အရှေ့ တည့်တည့်ကို စစ်ကြောင်း ရောက်နေပြီ။ ရေတာရှည်သကြား စက်ဥသြဆွဲသံက အနီးကလေးမှ အော်နေသည့် အလား အောက်မေ့ ရသည်။ ရန်ကုန် မန္တလေး အမြန်ရထားကြီး ဟိုးခပ်ဝေးဝေးမှ ခုတ်မောင်း ပြေးဆွဲသံကြား နေရသည်။ ဝါးရုံလှဲရွာမှာ တောင်နှင့် မြောက်ရှည် လျှားသည်။ ထို့ကြောင့်ရွာကို တောင်ဘက်ရွာ။ မြောက်ဘက်ရွာဟူ၍ ခေါ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ စဝင်သည့်ဘက်မှာ မြောက်ဘက် ရွာဖြစ်သည်၊ ရဲကုန်းရွာမှာ ဝါးရုံလှဲရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။
တစ်နာရီလောက် အသာလေးသွားရသည်ဟု နယ်ခံလူကြီးမှ ပြောပြသည်။ ရွာထဲသို့ ဝင်ဝင်ခြင်း ရွာလူကြီးမှ ရွာသူရွာသား တွေကို ခေါ်ယူစု ဆောင်းစေပြီး ကျနော်တို့ နှင့်တွေ့ ဆုံမိတ်ဆက်ပေး နေသည်၊ ရွာသူရွာသားများမှာ တောထဲမှ သူပုန်တွေကို အသေအချာ စူးစမ်းနေ၏၊ ရယ်မော စကားဖွဲ့ ကြ။ ကျနော်တို့ မှ တဖန်တော်လှန်ရေး အကြောင်း ရှင်းပြကြသည်။ တစ်ဦးနှင့် ရင်းနှီးစွာဖြင့် ။ ရွာလူထုမှ ဆေးလိပ်။ ရေနွေး။ မုန့် ပဲသားရည်စာများ တည်ခင်း ကျွေးမွေးကြသည်။
လှမြင့်သည် ဝါးရုံလှဲရွာတွင် ရန်သူ.လက်ကိုင်ဒုတ်ဖြစ်သည်။ ရန်သူမှ ထိုသူကို ရွာသားတွေထံမှ ပေါ်တာကြေး ကောက်ခိုင်း။ ကင်းကြေး။ မီးကြေး။ ဘာကြေး။ ညာကြေး ကောက်ခိုင်းသည်။ ရန်သူနှင့် ပေါင်းပြီး ရွာသူ ရွာသားတွေ အပေါ် နှိပ်စက်မှုများ ပြုလုပ်ကြောင်း။ ထို့ အပြင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့ အစည်းများ. လှုပ်ရှား သွားလာမှုများကို ရန်သူ့ ထံသတင်းအမြဲပေးသည်ဟု လည်း ကြားဖူးသည်။တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်းများ ရွာထဲရောက် လာတာ သိ၍ သူ့ ကိုဖမ်းလိမ့်မည် အထင်နှင့် ရွာမှ ထွက်ပြေးသွား တာလည်း ဖြစ်လိမ့်မည် ဖြစ် ကြောင်း ရွာခံလူကြီးများ ပြောပြ၍ သိရသည်။ထို့ ကြောင့် ကျနော့် တို့ အဖွဲ့ ယခုရောက်ရှိနေသည့် ရွာမှ အမြန်ဆုံး ပြန်ထွက် နိုင်အောင်ကြိုးစားမှ ဖြစ်မည်ဟု ရဲဘော်ဇော်လွင်မှ အကြံပေးသည်။ ကျနော်တို့ လည်း ထိုရွာထဲတွင် (၃)နာရီခန့် မျှကြာသွားသည်။ အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ရဲဘော်အောင်ကျော်မှ ရွာမိရွာဖများအား နှုတ်ဆက်ပြီး ရွာမှ ထွက်ခွာရန် မိမိတို့ အားတိုင်ပင် ထားသည်။ ရန်သူသည်ကျနော်တို့ ။ ဆုတ်လမ်းကို မည်သည့်နည်းနှင့် မဆို စောင့်၍ တိုက်ခိုက်နိုင်သည်။တိုက်ပွဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟု စိတ်ထဲမှာ တော့ တထင့်ထင့်။ တိုက်ပွဲဖြစ်လျှင် ကျနော်တို့တွင်ပါလာသည့် ရဲဘော်အချို့ မှာ ရဲဘော်သစ်သုံးလေးယောက် ပါသည်။
ရဲဘော်သစ်များကို စိတ်မချ၍ ကျနော် ကိုယ်တိုင် ရဲဘော် ဇော်လွင်တို့ အဖွဲ့ နှင့် လိုက်ပါ ခွင်ပြုရန် ခွင့်တောင်းပြီး လိုက်ပါခဲ့သည်။ ကျနော့်ထံမှ မီဇူဟို (ဆက်သွယ်ရေး စက်ကြီး) တစ်လုံးကို ရဲဘော် တစ်ဦးထံ အပ်ပြီး ပွိုင့်ထွက်သည်။ကျနော်တို့ သည်တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ငါးလံကွာမျှ ခွာ၍ လျှောက်ကြသည်။ ဝါးရုံလှဲရွာ မှစထွက် ထွက်ခြင်း ကွင်းပြောင်ကြီး တစ်ခုကိုဖြတ် ကျော်ရမည်။
နေဦးဟေ့- ရဲဘော်အောင်ကျော်တို့ အဖွဲ့ ကိုစောင့်ဦး၊ (ရဲဘော်ဇော်လွင်)
ဟေ့-မိုးစင်စင်လင်းတော့မယ်ကွ။ ငါတော့လူထုနှင့် တွေ့ ရလို့ ပျော်တယ်ကွာ (ရဲဘော်နွမ်ဂျာ)
ကြားတယ်။ ကြားတယ် သုံးငါးရှ်ိနေမယ် ရထားဖြစ်လား။( ရဲဘော်အောင်ကျော်)
ကြားတယ် ကတုံးကြီးမှာဖြစ်နေတယ်။ အတိုလေးနဲ့ နှစ်သုံးလုပ်မယ်-သုံးငါးနဲ့ ဆက်ရှိမယ်။
ရဲဘော်ဇော်လွင်စက်ပိတ်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ရှေ့ မှပွိုင့်ထွက်၍ကျနော်က သူ့ နောက်မှ လိုက်ရသည်၊ ကွင်း ပြင်ကို ငါးမိနစ်ခန့် ဖြတ်ရသည်။ကွင်းပြင်ထိတ်ရောက်သည့်နေရာတွင် နောက်ကအဖွဲ့ ကိုစောင့်မည်ဟု ရဲဘော် ဇော်လွင်မှပြောသည်။ နေရာ အကွက်အကွင်း မကောင်း၍ အတွင်ဘက်မှာ နားမည်ဟု ထပ်ပြော၍ ရှေ့ အတွင်း ဘက်ကို တိုးလိုက်ကြသည်။
တကယ်လို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ရင် အရင်ဆုံး မှောက်ချလိုက်၊ ဒါမှ ရန်သူပစ်ထုတ် လိုက်တဲ့ ကျည်ဆံဟာ ကိုယ်ရဲ့ချက်ကောင်းကို မထိနိုင် မှာကွ၊ (ရဲဘော် ဇော်လွင်)၊
လှည်းလမ်းကြောင်း အတိုင်း ချီတက်လာစဉ်၊ တိတ်စိတ်မှု တစ်ခုကိုဖြိုခွင်း လိုက်သည် ကတော့- မိုးကြိုးပစ်သလို ဒိုင်း-ဒိုင်း-ဒိုင်း- ဒိုင်း-ဝုန်း-ဂျိမ်း-။
အလိုသေနတ်သံပါလား၊ ရဲဘော်ဇော်လွင် သေနတ် ပေါက်တာလား၊ --ဟာမဟုတ်ဘူး- -ရန်သူပစ်တာ--၊ ရန်သူမှ ကျနော်တို့ ကို နှစ်ဦးစလုံးကို လက်နက် ကြီး။ လက်နက်ငယ် များဖြင့် တရစပ် ပစ်ခတ် နေတော့သည်။
ဂငယ်ပုံစံ ဝိုင်းထား၍ မည်သို့ မျှ လှုပ်၍မရပါ၊ အင်တိုင်းတော လှည်းလမ်းကြောင်း ကို ခွပြီး ဝိုင်းထားတော့မှ သေဖို့ပဲရှိတော့မည်၊ သေနတ် တကမ်းပဲ ရှိတော့သည်။
ရဲဘော်ဇော်လွင်မှာ မီးခိုးမှိုင်းလုံးကြီးတွေထဲ ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့ ၊
အလို--ကျနော့်ခေါင်းထဲ--ပူကနဲဖြစ်သွားသည်၊--သွေးတွေဖြာကျ---အရည်တွေစေးကပ်ကပ်--ရန်သူ့လက်တွင်းထဲ--သေပွဲဝင်ဖို့ --အချိန်ရောက်ပါ ရော့လား--ကျနော့်စိတ်တွေလေးနေ.၊ ကျောပြင့် --အောင့်သက် သက်--အသက်ရှုဖို့ အခက်တွေ့ နေ၏၊
ကျနော်သေနတ်သံမှာလည်းရန်သူ့ ထံကို ပြန်လည်ပစ်နေပုံက --ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲ--စိတ်တို့ ငြိမ်သက်စပြုပြီ။ တစ်ဘက်ရန်သူက တိုက်ပွဲ ဖြစ်သံ တွေအပေါ်--လွှမ်းမိုးမင်းမူးနေ။၊ --မကြာခင်သေရတော့မည်၊ အမေ့ဘုရားပန်းအိုး--ကျကွဲလောက်ရောပေါ့---နိမိတ်စိမ်းတွေမြင်လိုက်ပုံက။
--ကျား--နောက်ဆုံးပွဲသိမ်းလိုက်ပုံက၊ လှံစွပ်တွေ--ကျနော့်အနားကပ်လာပြီ--ရန်သူတစ်ယောက်--ကျနော့်ကို လှံစွပ်နဲ့ ထိုးဘို့ --လက်ကို အသာ အယာ မလိုက်--ထို့ နောက်--ငါတို့ ရွာထဲကို ဆက်ကြည့်မယ်ဟေ့--လာကြ--လာကြ။
နဖူးပြင်မှသွေးတို့ က --ရဲကနဲ--ရဲကနဲ--ကျလာလိုက်ပုံများ--အိမ်မက်တွေလား--တကယ်ဖြစ်တာလား--ဝေခွဲမတတ်---ဝေခွဲမတတ်။
ရဲဘော်ဇော်လွင် --သွေးတွေ--သွေးတွေ---သွေးတွေ၊ နွမ်းယဲ့ယဲ့။ ခန္ဒာကိုယ်ကြီး--ကျနော်ပြေးပွေ့ မိ--သူစကားပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူး၊ --ကျနော်မယုံဘူး--အာငွေ့ ထည့်လေမှုတ်ထုတ်--ဒါပေမယ့်--သူတော်လှန်ရေးအတွက် --လူထုအတွက်--အသက်ပေးဆပ်သွားခဲ့---၊
ကြာကြာနေ၍မဖြစ်။ အနောက်အဖွဲ့ အဆက်ပြတ်ပြီး အခြားလမ်းကြောင်းက ဆုတ်ခွာသွားလိမ့်မည်။ အချိန်ကိုကြည့်လိုက်တော့ နိုဝင်ဘာလ တစ်ရက်။ နံနက်(၃)နာရီ၊ ရဲဘော်ဇော်လွင်--ကျုပ်ခင်ဗျားကို အလေးနီပြုလိုက်ပါတယ်။
---မပြီးဆုံးသေးတဲ့ --စစ်အာဏာရှင် ပျက်သုန်းရေး တိုက်ပွဲကို --ဆက်လက်သယ်ဆောင် တိုက်ပွဲဝင်သွားဘို့ --ကျုပ်အလေး အနက် ဂတိပြု လိုက်ပါတယ်။
သူ့ ကိုနောက်ဆုံးအလေးပြုလိုက်တော့ --အံကြိတ်ထားရင်း---ကျလာသည့်မျက်ရည်ပူတို့ ကိုသုတ်--အလောင်းကိုစွန့် ခွာခဲ့ ရသည်။
သြော်--ဒီနှစ်ဆို ၂ဝဝ၃ခုနှစ်။ နိုဝင်ဘာလ(၁)ရက်ပါလား၊မကဒတ(၁၅)နှစ်မြောက်။နှစ်ပတ်လည် နေ့တောင်ရောက်ပြီ၊ ရဲဘော်နှင့်အတူ တော်လှန် ရေးမှာကျဆုံး ခဲ့ရတဲ့ အညတရတော်လှန်ရေး ရဲဘော်တွေရဲ့ဈာပနကို ဒီနေ့ အချိန်အထိ ကောင်းကောင်း မွန်မွန်ဆွမ်းသွပ် အမျှပေးဝေနိုင်မှု လုပ်မပေးနိုင် သေးပါလား၊ ရဲဘော်ဇော်လွင်ရေ---သတိတွေ အကြိမ်ကြိမ် ရနေတယ်ဗျာ။ ဒီလိုနေ့ ကိုရောက်တိုင်း --ခင်ဗျားကို တော်လှန်ရေး သစ္စာတွေ --အထပ်ထပ်ပြုရင်း--သူရဲကောင်းတို့ ဥဒါန်း--မကျဆုံးရစတမ်း--ကျုပ်ရွတ်ဆို ဦးညွှတ် နေတယ်ဗျာ။
Posted by victorOway at 2:11 PM No comments:
ကျနော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ရှစ်လေးလုံးအတွေ့အကြုံ ၄။
အလွမ်း ဖန်စီမက် (သို့) ဂျော်နီ တိုက်ဒေါင်း သူရဲကော...
ကျနော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ ၈လေးလုံးအတွေ့အကြုံ ၃။